WARARKA MAANTA 18ka Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Maxay ku fashilantay Dowladda Federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminaayo Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo ay beesha caalamka u xaqiijisay inaysan wax dhaqaallo aysan siin doonin xukuummadda uu hoggaaminaayo taasoo muddo sannad iyo laba bil aan wax dhaqaallo ah loo dhiibin ayadoo Dowladda Maraykanaka Iyo Dowladda Jarmalka ay jartay lacagihii ay ku taakulayn jireen Ciidanka Xoogga Dalka? Ma ogtihiin inay si toos ah u diideen Dowladdo badan inay dhaqallo siiyaan xukuummadda khiyaano qaran ee uu hoggaaminaayo Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo mooshinkii uu ka keenay in xilka looga tuuro Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo si layaab leh iskaga tagay jaggadda Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Aqalka Hoose? Maxay Hay'adda Transparency International ay u kashiftay xukuummadda uu hoggaaminaayo Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre inay tahay dowladda ugu musuqmaasuqa badan adduunka? Yaa runta qarin kara maanta? Aaway/xaggee ku dembaysay heshiiskii $ 300 ee milyan ee Dowladda Soomaaliya Iyo Dowladda Maraykanka kala saxiixdeen inta aysan Dowladda Maraykanka gelin waxa loo yaqaano “US Government Shutdown”? Aaway/Xagee ku dembaysay heshiiskii Dowladda Soomaaliya Iyo Dowladda Qatar ee $ 200 ahaa ma waxuu noqday 30 bas oo duug ah? Mise waxuu umalaynaa heshiisyadii qarsoodiga ahaa ee uu la soo galay shirkadda Soma Oil and Gas iyo kuwo kale inuu shacabka ka qarin karo?
Hiiraan 18ka Abriil 2018 Ciidamada milatariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay la wareegeen deegaano horleh oo ku yaalla gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Afhayeenka maamulka Gobolka Hiiraan Maxamed Nuur “Cagajoof” oo sheegay in Shalay Ciidamada huwanta ah ay la wareegeen gacan ku heynta deegaano u dhexeeya degmooyinka Baladweyne, Maxaas iyo Matabaan ee gobolkaasi
Waxaana uu intaasi ku daray Afhayeenku in ay wadaan qorshe cusub oo lagu kordhinayo howlgallada ka dhanka ah Xarakada Al Shabaab ee deegaanada maamulka HirShabelle.
Muqdisho 18ka Abriil 2018Waxaa haatan socdo loolan loogu jiro shaqsigii noqon lahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya ee bedeli lahaa guddoomiyihii is casilay ee Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Muqdisho 18ka Abriil 2018 Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maalmahaan ku sugan Magalada Baladweyne aya sheegay in uu dhamaaday Wajiga koowaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in dhawaan uu bilaaban doono wajiga labaad,kaas oo lagu xureyn doono deegaannada ka maqan Gacanta Maamulka Hir-Shabeelle,isla markana ay Gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Isaga oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey guulo waaweyn laga gaaray,sidoo kale ay siwadajir ah u fuliyeen Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
Madaxweyne Waare ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka waqtigaan heesta Dhalinyarada ku nool deegaannada Maamulka Hir-Shabeelle.
Malta 18ka Abriil 2018 Maxkamad ku taalla Jesiiradda Malta ayaa la soo tagaay Maxamed Cumar Ciise oo 22-jir ah, kaasi oo lagu helay inuu iibinayey Daroogada nooca loo yaqaano Murjuwaanaha
Eedeysanahaasi waxa uu Maxkamadda horteeda ka qirtay Dembiga lagu soo oogay, isago sheegay inuu Daroogada u iibinayey si uu u helo 80 EURO oo ah Kharajkii uu ku cusboonsiisan lahaa Waraaqaha Aqoonsiga ee uu ku joogo Jesiiradda Malta.
Maxkamaddu waxay Eedeysane Maxamed Cumar Ciise ku xukumay Xabsi 9 bilood iyo Ganaax Lacageed oo dhan 700 oo EURO.
Kuuriyadda Waqooyi 18ka Abriil 2018 Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahisay in agaasimaha CIA Mike Pompeo uu si qarsoodi ah uu u booqday Kuuriyada Waqooyi horraantii sanadkan islamarkana uu wadahadalo toos ah la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Muqdisho18ka Abriil 2018 Rag hubeysan ayaa xalay fiidkii waxa ay degaanka Carbiska oo ku dhaw degmada Afgooye ku dileen laba Askari oo ka tiran Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Inta aanu dilka dhicin ayaa raggii hubeysnaa waxa ay rideen rasaas badan oo ay ku kala eryanayeen dadka shacabka ah ee halkaasi ku sugnaa, maadaama goobta ay aheyd Maqaaxi lagu Shaaheeyo, kadibna waxa ay si toos ah u beegsadeen labada nin.
Dableydii dilka geystay ayaa si aan dareen ku jirin goobta uga dhaqaaqay iyada oo waliba markii ay sii baxayeen rasaas ku riday Haweeney goobta ku dhawayd, inkastoo aanay rasaastaasi waxyeeleyn.
Labada Askari ee la dilay ayaa xilligaasi aanan wadan wax Hub ah, balse waxa ay dhexda ka fadhiyeen dad shacab ah oo ku Shaaheynayay Maqaaxi yar oo ku taalla degaanka Carbiska.
“Walaal xalay habeen naxdin badan ayay ii aheyd, xilliga uu dilka dhacayay waxaa Da’ayay Roob, mar qura ayaan maqalnay Rasaas kadib banaanka ayaan u soo baxay, waxaan arkayay laba nin oo ordaya, aniga ayay xitaa rasaas igu sooi rideen, waana ka cararay, waxayna dileen laba Askari,” Ayay tiri gabar dadka degaanka ka tirsan.
Ciidan hubeysan oo ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa tagay goobta waxayna qaadeen Meydadka raggii la dilay, si baaritaano loogu sameeyo, intaasi kadibna loo aaso.
Saraakiisha Hay’adaha ammaanka ayaa si hoose inoogu sheegay labada Askari ee la dilay in lagu kala magacaabi jiray Maxamed Cali Baahsi iyo Cabdi Dhagool oo si weyn looga garanayo degaanka, gaar ahaan Maxamed Cali Baashi wuxuu ka tiranaa Ciidanka Canshuurta.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay naga soo gaaraya degaanka Carbiska ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada ay wadaan baaritaano amni xaqiijin ah, oo lagu dabagalayo Dableydii dilka geystay oo degaanka ay ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin ururka Al-shabaab.
Inta badan Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ka dhaca dilal ay geystaan Rag Bastoolado ku hubeysan, waxaana inta badan dilalka nuucaan oo kale ah fuliyay xoogag ka tirsan Shabaab.
Maraykanka 18ka Abriil 2018 Xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush ayaa geeriyootay iyada oo da’deedu tahay 92 sano.
Barbara Bush oo sidoo kale ahayd hooyada George W Bush ayaa ahayd haweeneyda keliya ee nasiibka u yeelatay in ay aragto ninkeeda iyo wiilkeeda oo madaxweyne ka ah Mareykanka.
Haweeneydan ayaa in muddo ah xanuun sanayd, waxaana dhammaadkii usbuucii tegay ay sheegtay in mar dambe aysan dawo u baahnayn.
Barbara Bush ayaa muddadii uu seygeeda ahaa madaxweynaha Mareykanka waxa ay aasaastay hay’ad qoysaska dan yarta ah ee ku nool Mareykanka ka caawisa waxbarashada.
Waxa ay sidoo kale si weyn uga soo horjeesaday faquuqa, iyadoo marar badan arrinta dumarka carruurta iska soo rid aka qaadatay mowqif ka duwan kan taageerayaasha seygeeda ee ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga
Maali 18ka Abriil 2018 Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in dagaalka dalka Mali uu sababay qulqulka qaxooti cusub.
Hay’adda UNHCR ayaa sheegtay in dad gaaraya 3,000 oo qof ay ilaa iyo imika ka qaxeen bartamaha dalka Mali islamarkana ay gaareen dalka dariska ah ee Burkina Faso.
Ku dhawaaqidda ay hay’adda qaxootiga ku dhawaaqday arrintan ayaa muujinaysa in xaaladda Mali ay ka sii dartay islamarkana dagaalada ku salaysan qoomiyadaha ay dad badan ku qasbeen in ay qaxaan.
Qaxootigii ugu horreeyay ee Mali ayaa qaxay 2012 waxa ayna dadkaasi oo leh qoomiyado kala duwan ay imika ku nool yihiin dalalka Mauritania, Burkina Faso iyo Niger.
Qaxootigan cusub ee dalka Mali ayaa u badan dadka madowga ah waxa ayna ka qaxayaan dagaalka ka socda bartamaha dalka Mali kaasi oo u dhaxeeya Fulanis iyo Dogons.
Goobaha imika uu dagaalka ka socdo ayaa ah goobo aan la gayn ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobay.
Bartmaha dalka ayaa waxaa ku yaalla magaalooyiin taariikhi ah sida Djenne iyo Mopti.
Waa goobta ay hay’adaha u dooda xuquuqda aadnaha ay sheegeen in ciidamada Mali ay sida joogtada ah ugu garaacaan kuna dilaan dadka qoomiyada Fulanis.
Hay’ada UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigan cusub ee imika Mali ka qaxaya ay aadan goobo ka tirsan dalka Burkina Faso halkaasi oo ah meel ay cunno yari ka jirto.
Dagaalka Mali ayaa bilaabmay 2012 markaasi oo kooxo xagjir ah oo gacan saar la leh urur waynaha Al Qaeda ay la wareegeen wuqooyiga dalkaasi
Muqdisho 8ka Abriil 2018 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) oo xalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Masar Mudane Cabdulfataax Al Sisi ayaa uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay Dowladda Masar la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay Madaxweyne Farmaajo in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay sii adkeynayso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah, wuxuuna sheegay inuu ka rajeynayo hormar intaas ka buuran.
Labada Hoggaamiye oo waqti kooban wada hadlayay ayaa isla soo qaaday qaabkii loo xoojin lahaa xiriirka wadajirka ah iyada oo la sii wanaajinayo iskaashiga labada dhinac ee la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada.
Sidoo kale dhinacyadan ayaa waxa ay dib u eegeen horumarkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dadaalka xukuumadda Soomaaliya ay ku soo celisay amniga iyo xasiloonida, si loo fuliyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Muqdisho 8ka Abriil 2018 Golaha Abwaanada Soomaaliyeed Oo Ka Hadlay Xadhiga Niciima Qorane Somalilandna Ugu Baaqay In y Sii Dayso Abwaanad Niciima Qorane
WARARKA MAANTA 16ka Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Yaa noqon doona Guddoomiyaha cusub ee soo socda? Maxaad kala socotaan afgambiga qarsoon ee dalka Soomaaliya la galiyey kadib markaa shaqada si layaab leh looga cayriyey Guddoomiyihii hore Golaha Baarlamaanka Mudane Prof. Maxamed Cismaan Jawaari? Ma runbaa inuu soo laabtay afgambigii dalka ka dhacay 1969kii? Meeqo shirkaddood oo shisheeye ah ayuu heshiis qarsoodi ah la soo galay khaa'inu; waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo maalgelieyey mooshinka xilka looga qaaday Guddoomiyihii hore Golaha Baarlamaanka Mudane Prof. Maxamed Cismaan Jawaari? Maxay ku fashilantay xukuummada ku mashquushay burburinta hawlaha golaha shacabka? Yaa rag argagixiso ah xilal sar-sare u maqacaabay inay gudaha dalka ka qabtaan? Yaa runta qarin kara?
Muqdisho 16ka Abriil 2018 Kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa galabta Degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen sargaal la sheegay in uu katirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya.
Dilka sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay Xasan Dheere ayaa ka dhacay meel ku dhaw saldhiga booliiska degmada Yaqshiid, waxaana kooxihii dilka geestay si deg deg ah uga baxsadeen halka uu dilku ka dhacay.
Ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya iyo Nabad sugida ayaa gaaray halka uu dilku ka dhacay, baaritaano ay sameeyeen ciidamada amaanka ayaana la sheegay in aysan kasoo bixin wax natiijo ah.
Magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ka dhaca dilal qorsheesan oo loo geesto ciidamada iyo shaqaalaha dowlada, waxaana inta badan baxsada dadka dilalka qorsheesan fuliya.
Muqdisho 16ka Abriil 2018 DFS ayaa waxay isbedal aan caadi ahayn ku sameysay ciidamadii ammaanka ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan qorshaha amniga ee magaalada.
Shacabka Muqdisho ayaa waxay hadda dareemayaan neef aad u weyn iyo qabow badan kadib markii laga dulqaaday culeysyo haystay.
Shacabka ayaa markii hore waxaa hayey xayiraad iyo qaraxyo aan joogsi lahayn, balse carro ayeey taasi ka qaadeen.
Dadka waxay hadda aad usoo dhoweynayaan isbedalka ka jira magaalada Muqdisho, waxaadna mooddaa in dadku hadda amaan u bilabayaan dowladda uu hoggaamiyo Farmajo.
Shacabka oo la cadaadiyo ayaa k
Muqdisho 16ka Abriil 2018 Dowlada Imaaraatka ayaa go’aansatay in ay jiijiso tababaradii iyo taageeradii ay siineysay ciidanka Milatariga Soomaaliya, kadib markii meeshii ugu xumeyd uu gaaray xiriirka labada dal u dhaxeeya. Wakaalada wararka u faafisa Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa shaacisay in dowlada Imaaraatka ay joojisay tababaradii iyo taageeradii ay siinayeen ciidanka kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland .
Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa go’aankan qaadatay kadib markii ay ka carootay lacagtii ay boorsooyin ku wateren diblumaasiyiin Imaaraatka u dhashay oo dhawaan lagu qabtay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Wakaalada Wararka ee WAM ayaa sheegtay in dowlada Imaaraatka aad uga xumaatay sida ay u dhaqantay dowlada Soomaaliya, waxa ayna Wakaalada sheegtay in dowlada Imaaraatka tababar siisay in ka badan 2,400 oo askari.
Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa Muqdisho iyo Puntland ku laheyd xeryo ay ku tababarto ciidanka Soomaaliya, waxa ayna Imaaraatka dhaqaale iyo agaba siiyeen ciidamada ay Soomaaliya u tababareen.
Imaaraatka ayaa Soomaaliya kala baxday qeyb kamid ah Saraakiishii tababareesay Ciidanka Kumaandooska Soomaalia, waxa ayna arintan cirka kusii shareertay xiriirka aan wanaagsaneyn ee labada dal u dhaxeeya.
Wasaarada Gaashanadhiga Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in uu dhamaaday heshiiskii ay Imaaraatka ku tababarayeen ciidanka Soomaaliya, waxa ayna Wasaaradu sheegtay in ciidankaasi ay si buuxda ula wareegayaan.
Maamulka Koonfur Galbeed 16ka Abriil 2018 Madaxweynaha maamulka K/galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku hungoobay qorshe ballaaran oo uu ka lahaa dowladda federaalka Soomaliya, kadib markii uu xukuumadda ku gacan siiyey ridista Jawaari.
Shaqsiyaad ku dhow Shariif Xasan ayaa inoo sheegay in laga diidey qorshe uu ku doonayey in shaqsiga noqonaya guddoomiyaha Baarlamaanka dhankiisa ka keensado.
Shariif ayaa loo sheegay in uu ku mahadsan yahay saacidaadda Nabad iyo Nolol, balse aan laga aqbali dooni inuu soo fara gishto damacooda.
Sidoo kale, waxa loo sheegay in shaqsiga la keenayo la doonayo inuu ahaado mid ku feker ah Xasan Cali Kheyre iyo Farmaajo.
Maamulka Galmudug 16ka Abriil 2018 Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxa ay sheegayan in Maanta halkaasi ka dhacday Kursi ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka.
Waxaa ku tartamayay kursiga Musharaxiinta kala ah Maxamed Cilmi Afrax ( mideeye) iyo musharax Cabdulahi Faarax wehliye.
Cabdullahi faarax Wehliye ayaa helay 28 Cod Waxaana xumaaday 3 Cod, halka Musharax Mideeye uu helay 17 Cod.
Ammaanka xarunta ay ka dhaceysay doorashadda ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana dhammaan dhuusamareeb ku sugnaa Ergadii doorashadda.
Guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in uu guulaystay Xildhibaan Cabdulaaahi Faarax Wehliye oo hadda ah Wasiir dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Kursiga Maanta doorashadiisa ay ka dhacday Dhuusamareeb ayaa horay waxaa uga geeriyooday allaha unaxariiste Bootaan Ciise Caalin.
Maamulka Hirshabelle 16ka Abriil 2018 Taliyaha Milatariga Soomaaliya qeybtooda ku sugan Degmada Maxaas ee gobalka Hiiraan ayaa sheegay in ay Ciidamo kala dhax dhigayn Maleeshiyo dhawaan ku dagaalamay Tuulooyin hoos yimaada Maxaas.
Taliye Muumin Garaad ayaa Idaacadda Kulmiye Wareysi uu siiyay ku sheegay in xaaladda ay degan tahay odayaasha Beelaha dagaalmayna ay wadaan dadaalo xal loogu raadinayo dhinacyadii dagaalamay.
Taliye Muumin ayaa sheegay in ay Ciidamada Soomaaliya dhax dageen meel u dhaxeysa Laba dhinac si looga fogaado dagaal dambe.
Beelahaan ayaa muddo badan ku dagaalamaya Tuulooyin ka tirsan degmooyinka Maxaas iyo Matabaan ee gobalka Hiiraan walina xal lagama gaarin dirirtooda.
WARARKA MAANTA 15ka Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Yaa noqon doona Guddoomiyaha cusub ee soo socda? Maxaad kala socotaan afgambiga qarsoon ee dalka Soomaaliya la galiyey kadib markaa shaqada si layaab leh looga cayriyey Guddoomiyihii hore Golaha Baarlamaanka Mudane Prof. Maxamed Cismaan Jawaari? Ma runbaa inuu soo laabtay afgambigii dalka ka dhacay 1969kii? Meeqo shirkaddood oo shisheeye ah ayuu heshiis qarsoodi ah la soo galay khaa'inu; waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo maalgelieyey mooshinka xilka looga qaaday Guddoomiyihii hore Golaha Baarlamaanka Mudane Prof. Maxamed Cismaan Jawaari? Maxay ku fashilantay xukuummada ku mashquushay burburinta hawlaha golaha shacabka? Yaa rag argagixiso ah xilal sar-sare u maqacaabay inay gudaha dalka ka qabtaan?
Riyadh 15ka Abriil 2018 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray Magaalada Dammaam ee dalka Sucuudiga, halkaas oo uu ka furmi doono Shirka 29aad ee Madaxda waddamada ku mideysan ururka Jaamacadda Carabta.
Muqdisho 15ka Abriil 2018 wararka inaga soo gaaraya wadada Buundooyinka ee degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab ayaa waxa ay sheegayaan in saakay aroortii uu halkaasi ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare dhaawac ah.
Waxaa shilkan ku dhaawacantay ilaa Afar qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen Darawaladii labada gaadiid kala kaxeynayay, mana jirin dhimasho, waxaana dadkii dhaawacmay loo qaaday Isbitaalada Muqdisho.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Isbitaalada magaalada Muqdisho ee ku aadan dhaawacyada shilkan ka dhashay ayaa waxa ay sheegayaan in ay aad u daran tahay xaalada Darawalkii kaxeynayay gariga BL-ka ah.
Maraykanka 15ka Abriil 2018 Hadal-qoraal oo uu Hawlgalka Maraykanka ee Somalia maanta soo dhigay Bartooda Twitter-ka ayaa lagu sheegay inay si kulul u cambaaraynayaan Qaraxii maalintii Khamiista ee la soo dhaafay ka dhacay Garoonka magaalladda Baraawe ee Gobalka Sh/hoose, oo ay 5 Ciyaartoy ku geeriyootay, halka ay Tobanaan kale ku dhaawacmeen.
Hawlgalka Maraykanka ee Somalia US mission in Somalia) waxay kalooNA sheegeen inay Tacsi u dirayaan dhamaan Qoysaska iyo saaxiibadda dadkii ku geeriyodoay qaraxaasi, waxayna kuwii dhaawacmay u rajeeyeen Caafimaad Degdeg ah
Dhinaca kale, Xarakadda Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qarixii ka dhacay Garoonka magaalladda Baraawe.
Mntamar 15ka Abriil 2018Dolwadda Myanmar ayaa sheegeysa in ay dalkeeda dib ugu celisay qoysaskii ugu horreeyay ee ka tirsan Muslimiinta qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya ee saandkii hore u qaxay dhanka Bangladesh.
Myanmar waxa ay sheegtay in shan qoys oo ka tirsan qiyaastii 700,000 ee qof ee sanadkii hore ka qaxay dalkaasi ay hadda dalka ku soo laabteen, iyadoo la geeyay xero ku taalla gobolka Rakhine.
Kaddib bilo ay wadahadal dhex marayeen waddamada Bangladesh iyo Myanmar ayaa waxa ay markii dambe ku heshiiyeen in muddo laba sano gudahood ah lagu soo afjaro dib u celinta qaxootiga Rohingya.
Balse Qaramada Midoobey ayaa ka digtay dhibaatada soo wajihi karta dadkani la doonayo in Myanmar dib loogu celiyo maadaama xukuumadda Myanmar aysan diyaar u ahayn dadkaasi.
Dadyowga Muslimiinta Rohinja ayaa ka khaxay dalka Myanmar kaddib markii milatariga Burma uu billaabay hawlgal Qaramada Midoobey ay ku tilmaantay isir sifeyn ka dhan ah qpwmiyaddan Rohingya.
Dowladda Myanmar ayaa beenisay eedeymahaasi waxa ayna hawlgalkaasi ku tilmaantay mid sharciga waafaqsan oo lagula tacaalayo kacdoon ka jira gobolka Rakhine.
Valenzuela 15ka Abriil 2018Dowladda Mareykanka ayaa waddamada ku yaalla koonfurqa qaaradda Ameerika ka codsaday in ay takooraan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo ka hadlayay shirka madaxda waddamadani ee kafurmay magaalada Lima ee caasimadda Peru ayaa ka codsaday hoggaamiyeyaashani in ay ku dedaalaan sidii loo go’doomin lahaa madaxweyne Maduro.
Waxa uu sheegay in Mareykanka uusan iska daawan doonin Venezuela oo sii burbureysa.
Mike Pence waxa uu ugu baaqay madaxweyne Maduro in uu ogolaado in gargaar bani’aadanimo la gaarsiiyo dadka reer Venezuela ee ay haysato cunno iyo dawo la’aanta.
Pence ayaa shirkan ku matalaya madaxweyne Trump oo u baaqday sababo la xiriira sidii uu u agaasimi lahaa jawaabta laga bixinayo weerar ka dhacay gudaha dalka Suuriya oo la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada.
Dalka Venezuela ayaa wajahaya mushaakil dhaqaale waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo madaxweyne Maduro oo isaguna arrimahani ku eedeynaya Mareykanka.
Waddoo Dhowr ah 15ka Abriil 2018 Waddamada Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa billaabay isku day cusub oo ay ku doonayaan in baaritaan madax-bannaan lagu sameeyo eedeymaha ah in dowladda Suuriya ay isticmaaleyso hubka kiimikada.
Fallaagada kooxda Jeysh Al-Islaam ayaa ugu dambeyntii la soo dhaafay usbuucii aqbalay in ay isaga baxaan magaaladan, waxaana bixitaankooga uu ku soo beegmaya maalmo k
Hargaysa 15ka Abriil 2018Warbaahinta Gudaha Maamulka Somaliland siiba Tv-ga Hctv oo Xaruntiisu Tahay Magaalada Hargaysa ayaa Soo Bandhigay Qashinka iyo Nadaafad Darada ka Jirta Gudaha Magaalada Hargaysa ee Caasimada Maamulka Somaliland.
WARARKA MAANTA 11ka Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Yaa noqon doona Guddoomiyaha cusub ee soo socda?Maxuu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ugu diiday inuu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed Mudane Prof. Maxamed Cismaan Jawaari uu ka hor hadlo barlaamka hortiisa maanta oo ay Arbaco tahay sida uu horayba u sheegay Jawaari? Mise waxaa la barayaa cashirkii uu u dhigay raysal wasaarihii hore Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo uu u diiday inuu golaha baarlamaanka hortiisa ka hadlo? Ma ogyahay Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inay beesha caalamka wax dhaqaallo ah siin doonin xukuummad fashilantay ee khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo ku guullaystay mooshinkii iyo qaskii siyaasaddaysnaa ee lagu khasbay Guddoomiye Jawaari inuu isku casilo xoog asagoo hanjabaad iyo qori loogu caga-jugleeyey sida ay xaqiijiyeen ilo xogagaal ah? Bal nala daawada wajiga Guddoomiye Jawaari oo la taagan Madaxweyne Farmaajo asagoo qalqalsan!
Muqdisho 11ka Abriil 2018 Muudeey oo la sheegay inuu baajiyay kulanka Baarlamaanka, Kulanka Xildhibaanada Golaha ee Baarlamaanka Soomaaliya ee lagu waday inuu maanta qabsoomo ayaa baaqday kadib markii la sheegay inuu fariin baajin ah udiray Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha Shacabka Cabdi wali Shiikh Ibraahim Muudeey.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa KNN u xaqiijiyay inuu baaqday kulankii maanta ku hor imaan lahaa Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari gudoomiyihii iscasilay.
Si rasmi ah looma oga sababta baaqashada hasa yeeshee Shalay ayaa gudoomiye Jawaari shirkiisa Jaraa’id ku sheegay inuu faah faahin doono sababihii ka dambeeyay iscasilaadiisa.
Sida ay inoo xaqiijiyeen xildhibaano ka Tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, kulanka maanta waxaa khudbad ka jeedin lahaa Gudoomiyihii iscasilay Jawaari,islamarkaana ku shaacin lahaa iscasiladiisa.
Xalay waxaa labo Fariin oo iska soo horjeeda loo kala direy Xildhibaanada baarlamaanka SoomAaliya ee wali labadda garab u kala qeybsan.
Farriin laga soo diray xafiiska Guddoomiyihii iscasilay Jawaari ayaa lagu sheegay in kulanka maanta ee baarlamanka Soomaaliya uu yahay hadal jeedinta Guddoomiyaha, halka farriinta C/wali Shiikh ibraahim Muudey lagu sheegay in uusan jirin kulan illaa amar dambe
Inkastoo Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari uu shalay ku dhawaaqay iscasiladiisa, ayaa hadana go’aanka Gudoomiye ku-xigeenka koowaad C/wali Muudey waxa uu muujinayaa in wali uu meeshiisa yahay khilaafkii baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Waxaa baaqday kulankii baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee maanta ka dhici lahaa xarunta Golaha shacabka ee Magaaladda Muqdisho.
Muqdisho 11ka 2018 Maxamed Mursal Shiikh C/raxmaan Wasiirka Difaaca Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Imaaraadka tababarka ay siiyaan ay yihiin kuwa ka tirsan Xoogga dalka Soomaaliya oo hoostagga Wasaaradda Gaashaandhigga lagana soo wareejin doono dhawaan.
“waxaan la soo wareegeynaa Ciidanka difaaca Soomaaliya ee tababarka siisay Dowladda Imaaraadka Carabta, Ciidankaas ayaa si toos loola soo wareegi doonaa 12ka Bishaan oo ku beegan aas aaska Ciidanka Soomaaliya”ayuu yiri Wasiirka Difaaca.
Waxaa uu sheegay inay u mahad celinaayaan dowladda Imaaraadka Carabta Tababarka ay siiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu tababaray xerada Generaal Goordan
Baxrayn 11ka 2018 Baxreyn”Dowlada Soomaaliya waa ka abaal dhacday Imaaraadka Carabta”
Abriil 2018 Sheikh Khalid Binu Ahmed Al-Khaliif Wasiirka Arimaha dibadda Dalka Baxreyn ayaa ku eedeyey Dowladda Somaaliya mid ka abaal dhacday wanaagii iyo waxtarkii Dawlada Imaaradka Carabta u gashay dalka Soomaaliya.
France and Sacuudiga 11ka Abriil 2018 Madaxweynaha dalka Faransiiska, Emmanuel Macron iyo Dhaxal-sugaha dalka Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan ayaa hadalkaasi ku sheegay mar ay Shir Jaraa’id ku qabteen Qasriga Madaxtooyadda ee magaalladda Paris,
Labada Hoggaamiye waxay sheegeen inay gacan ka geysan doonaan Dagaalka ka dhanka ah Xarakadda Alshabaab iyo Ammaanka Guud ee Badda Cas, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Warkan oo aan ka soo xiganay Wargeyska ASHARQAL AWSAD ee Sacuudiga ayaa waxay kaloo isku raaceen inay taageero u fidiyaan Hawlgalladda Nabad-ilaalinta AMISOM iyo kuwa kale ee la spcda Qaaradda Afrika.
Dhaxal-sugaha Sacuudiga, ahna ahna Wasiirka Difaaca ee dalkaasi, Maxamed Bin Salmaan waxa uu tilmaamay inay 100-million oo Dollar ku taageereen Hawlgalka AMISOM iyo kuwa ka socda dalalka kale ee Afrika.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Faransiiska iyo Dhaxal-sugaha Sacuudiga waxay kaloo ka wada hadleen Ammaanka Badda Cas, Xaalladda Syria iyo saamaynta Iiraan ku leedahay khatarta dalalka Mandiqadda.
Hiiraan 11ka Abriil 2018 Dagaal u dhaxeeya labo maleeahiyo Beeleed ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobalka Hiiraan waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Baanyaaley waxa uuna daba joogaa dagaalo mudo halkaas ka socday oo u dhaxeeya Beelo ka soo kala Jeeda degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobalka Hiiraan.
Maamulka gobalka ayaa sheegay in aysan waxba ka qaban karin dagaalka socda loona baahan yahay in ay ka qayb qaataan Hirshabeelle iyo Dowladda dhexe.
Tirada dhimashada ayaa lagu sheegayaa ku dhawaad 10 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ka soo jeeda.
Myammar 11ka Abriil 2018 Toddobo askari oo reer Myanmar ah ayaa xabsi loogu xukumay gacantii ay ku lahaayeen dilkii sannadkii hore loo gaystay 10 nin oo Muslimiinta Rohingya ka mid ah.
Kenya 11ka Abriil 2018 Hay’addaha Ammaanka dalka Kenya ayaa ka digay Weeraro Argagixiso oo ay geystaan Al-Shabaab kuwaa soo ka dhaca Magaalooyin ka tirsan dalka Kenya.
Kenya waxa ay sheegtay in bilooyinkii lasoo dhaafay ay ka hortaggeen Weeraro badan ka dib markii ay xog badan soo Gudbiyen Hay’addaha Ammaanka.
Dowladda ayaa sheegtay in ay jirto cabsi ku aadan weeraro ka dhaca Magaalo xeebeedyada dalka Kenya , halkaasi oo ay ku badan yihiin dadka ka yimaada dalalka ka baxsan Kenya iyo sidoo kale Magaalada Mandera oo xuduud la leh Magaalada Baledxaawo ee Soomaaliya.
Magaalada Lamu ayaa la sheegaya in ay ka baxeen dadka aan Kenyaan aheyn sababo la xariira ammaankooda.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale la sheegaya in ay heegan gelisay ciidanka dowladda Kenya ee ku sugan Magaalo xeebeedyada dalka Kenya.
Sarkaal Sare oo u hadlay dowladda Kenya ayaa sheegay in ay ka feejigan yihiin Weeraro ka yimaada Al-Shabaab.
Digniin 11ka Abriil 2018 Digniin hordhac ah ayoo loo diray iyo Alarmi dhamaan Diyuuradaha ku safra biyaha Maritareeniyaanka 72-da saac ee soo socota iney ka fee jignadaan Gantaalada ka dhaca Kuruuska iyo kuwa diyuuradaha laga ganna ee macquulka ah in lagu weeraro Siiriya saacadaha soo socda . Mareykanka ayaa ku goodiyay inuu u aargudi doono shacabka Siiriya ee dhawaan lagu buufiyay sunta Gaaska ee Kiimikaalka iyadoo shirkii Gollaha amaanka ee saacado badan socday uu kusoo idlaaday hanjabaad kagadaal markii Raashiya ay isticmaashay codka diidmada qayaxan ee VITO tasoo ka dhiggan | lama weerari karo Dimishiq |, lakiin Washington ayaa ka gadooday is hortaaga Ruushka ee duqeynta Siiriya tiro dhan markii lixaad .
Nikki Haley , gabadha u fadhida Washington Quruumaha Midoowe, ayaa fadhiga Gollaha ka tiri” Waxba ma difaaci dontaan Assad , gabaad uma noqon dontaan tallaabo ayaan ka qaadi donaa adinkoo arkaya.
Madaxweyne Trump ayaa baajiyay safarkii uu kaga dhoofi lahaa Mareykanka isagoo shir deg dega isugu yeeray Saraakiisha Ciidanka iney u diyaar garoobaan weerar jawaab ah oo Asad lagu qaado.
Saacad kahor ayaa waxaa Jasiirada Qubrus ka dhaqaaqay Markab sida sawaariiq difaac oo ka hor tagta gantaalada Raashka iyo Siiriya cabsi laga qabo in jawaab ay la kulmaan mareykanka .
Siiriya ayaa heegan galisay Ciidamadeeda iyadoo shiday qalab Digniin ah .
Muqdisho 11ka Abriil 2018 Wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Britain Col. Mark Lancaster oo booqasho aan la shaacin ku jooga Muqdisho ayaa ammaan u jeediyey howlgalka Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ka wadaan Soomaaliya.
Mr. Mark Lancaster ayaa bogaadiyay sida ay Midowga Afrika ugu go’an tahay wiiqida khatarta iyo la dagaallanka Al-shabaab.
Wasiiru Dowlaha ayaa kulan la qaatay wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, danjire Francisco Caetano Madeira iyo taliyaha ciidamada AMISOM Lt. Gen. Jim Beesigye Owoyesigire, iyagoo ka wada hadlay howlgalada Ciidamada AMISOM iyo sidii loo xoojin lahaa doorka taageerada ah ee kaga beegan Britain.
Sidoo kale wuxuu Mr. Mark Lancaster xusay doorkii ay AMISOM ka soo qaadatay xasilinta Dalka Soomaaliya muddadii 11-ka Sano ahayd ee la soo dhaafay, isagoo sheegay inaysan Midowga Afrika weligood joogayn Soomaaliya loona baahan yahay in horumarka guulaha ay noqdaan kuwo lagu kalsoonaan karo.
Wasiiru Dowlaha ayaa sheegay in howlgalka taageerada Britain ee loo yaqaan UK Mission Support Team (UKMST), oo hoos imanaya mashruuca UK-7O uu kor u qaadayo tayada dhismaha iyo taageerada kale ee AMISOM iyo Ciidamada ammaanka ee Muqdisho iyo Gobollada Dalka Soomaaliya.
Nairobi 11ka Abriil 2018 Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo aqlabiyad weyn ku dhex leh Barlamaanka Kenya aya ka codsaday ragga Soomaalida ku nool dalkaasi inay sababo dhinaca siyaasadeed awgeeda u guursadaan dhowr xaas, si loo kobciyo galaangalka Siyaasadda ee Mustaqbalka.
Xildhibaanka oo laga soo doorto magaalladda Garissa ee W/bari Kenya ayaa hadalkaasi ka sheegay Bandhig Dhaqameed ka dhacay Xaafadda Eastleigh ee magaalladda Nairobu, wuxuuna ku taliyey inay ragga Soomaalida Kenya guursadaan wax ka badan hal xaas, su ay u yeeshaan tiro ugu yeeshaan Xilalka Siyaasadda.
Wuxuuna si cad ah u sheegay inuu Sharciga Islaamka u fasaxayo iyaga inay guursadaan wax ka badan hal xaas.
Dil toorey loo adeegsaday oo Caawa ka dhacay Xaafad ka mid ah Muqdisho
“Muslim ahaan, waxaa muhiimad naloo siiyey inaan guursano ilaa 4 Xaas, si aan u soo saarno carruur badan sida ugu suurtogalsan” ayuu yiri Aadan Barre Ducaale.
Waxa uu intaasi ku daray inay ka shaqeyn doonaan Siyaasadda xilliga Cod-bixinta, si looga saro maro kuwo kale.
Si kastaba ha ahaatee, Mujtamaca Soomaalida ku nool W/bari Kenya waxay ka mid yihiin Qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi, kuwaasi oo aan Galaangal Xooggan ku lahayn Siyaasadda iyo Haykalka Dowladeed.
WARARKA MAANTA 10ka Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Yaa noqon doona Guddoomiyaha cusub ee soo socda? Ma run baa inay beesha caalamka diiday inay wax dhaqaallo ah siiso xukuummadda uu hoggaaminaayo khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo Guddoomiyihii Golaha Shacabka Mudane Maxamed Shiikh Cismaan ku riday moshin kadib markii uu diiday inuu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Cismaan u saxiixo heshiisyo qarsoodi ah? Maxayse shacabka Soomaaliyeed 87% u rabaa inuu iscasilo khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre? Khayaano khiyaano ayeey dhashaa marka waxaanu sugaynaa wixii Soomaaliya ka qaban lahaa dadkan wada khaa'inul waddanka ah!
Muqdisho 10ka Abriil 2018 Wararka laga helayo xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saqdii dhexe ee xalato ciidamada amaanka ee dowladda Soomaaliya in ay xirireen wadooyin horay Gadiidka iyo dadkuna ay u isticmaali jireen.
Goobaha la xiray waxaa ka mid ah wadada Wershadaha oo lagu jaray dhagaxyo waaweyn oo la mid ah kuwa lagu xiray wadooyinka jidcadayaasha ah ee magalada Muqdisho.
Dhamaan wadooyinka Jidcadayaasha ah ee soogala wada Wershadaha ayaa la xaqiijiyey in la xiray xalay saakana ay ku soo baraarugeen iyaga o ay ku teedsanyihiin dhaxagyo shub ah.
Maamulka Puntland 10ka Abriil 2018 Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdillaahi Camey ayaa magaalada Laascaanood u magacaabay Duq Ama Gudoomiye Cusub kaasi oo ah Cabdiqani Makhtal Maxamed Garaad.
Magaalada Laascaanood ayaa waxaa gacanta ku haya maamulka Somaliland Mudoo ku simin 10 sano .
hadaba Duqi hore ee lascanood ee Puntland Cabdale Xaaji warsame oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Ku xigeenka Puntland xill usan ka qaadin balse todobad kahor uu is casilay ,kadib markii cadadis xoogan uu kula kulmay Camey.
Cabdala ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo Duqa isaga badalay ,isago fah faahin dheeri ah kabixiyeey sababta uu isku casilay .
Maamulka Puntland 10ka Abriil 2018 Degmada Qandala ee gobolka Bari oo kutaal xeebaha Bari ee Puntland ayaa waxaa Maamulka Puntland ay ka bilaabaysaa mashaariic horumarineed tan iyo markii halkaasi laga saaray dagaalyahano katirsan kooxda Daacish.
Waxaa degmada Qandala gaarey wafti ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda qorshaynta ee Puntland Shire Xaaji Faarax, wasiiro, saraakiil ciidan iyo xildhibaano katirsan barlamaanka Puntland.
Muqdisho 10ka Abriil 2018 Wasaarada arrimaha dibadda xukumada fedraalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddi ka kooban 11 xubnood oo iskaashi iyo wada shaqeyn la sameysa guddi kale oo ka socda Qaramada Midoobey oo dib laga faafin doono si loo horumariyo istiraatiijiyadaha suuragalka ay tahay inay u gogol xaarto raadraacidda fulinta qorshayaasha horumar ee lagu xoojinayo maqaamka Soomaaliya iyo waxa shacabkeedu hantiyay.
Kulan ka dhacay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo u dhaxeeyay qaar ka mid ah Wasaaradaha Xukuumadda iyo Ergeyga Qaramada Midoobey ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ka mid ah iskaashi iyo wadashaqeyn toos oo dhex marta labada dhinac.
Guddiga xiriirka ee dalka martida loo yahay ayaa waxa uu ka kooban yahay sidan:
Maraykanka 10ka Abriil 2018 Hiiraan Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ballanqaaday “in uu awood” adeegsan doono marka uu jawaabta ka bixinayo weerarka kiimikada ah ee la sheegay in uu ka dhacay dalka Suuriya, iyada oo reer galbeedku ay ka baaraan dagayaan jawaabta ay ka bixin lahaayeen arrintaas.
“Waxaan noo bannaan qaabab badan oo milatari,” ayuu ku yiri Trump oo saxafiyiinta la hadlaya, wuxuuna intaas ku daray in ay go’aansan doonaan “wax yar ka dib”.
Trump wuxuu sheegay in Maraykanku “sawir wanaagsan” ka helayo cidda ka dambaysay dhacdadii Douma ee Sabtidii.
Trump ayaa sidoo kale arrintan kala hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ammin dambe oo Isniintii ah, labada masuulna waxay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin in tallaabo “adag qaadaan”.
Ra’iisulwasaaraha UK, Theresa May ayaa sheegtay in ay “si buuxda u cambaaraynayso” falkaas “waxshinimada ah” ee lagu eedeeyay in kiimikada loo adeegsaday, waxayna ku baaqday in arrintaas loo qabsado dadka Bashaar Al-Asad taageera
Hiiraan 10ka Abriil 2018 Hiiraan ayaa sheegaya in ay socoto waan waan lagu qaboojinayo dagaal beeleed maalmihii dambe ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga gobolkaasi.
Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalana wey ku dhaawacmeen ka dib markii dagaal laba malayshiyo beeleed ku dhexmaray degaanka Kubure oo hoostaga degmada Maxaas ee gobalka Hiiraan, sida ay sheegeen dadka degaanka.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa badankooda ahaa dhinacyadii dagaallamayay iyadoo xiisadana ay ka bilaabantay dil aano qabiil la xariira oo degaankaas ka dhacay.
Dagaallada degaanka ayaa la sheegay inay dib usoo cusboonaadaan xilliyada abaaraha iyo marka uu roob ka curto, oo qeyb deegaanka ka mid ah oo dadka reer miyaga xoolahooda ula guuraan.
Xiisada dagaal ayaa wali ka taagan deegaanka Kubure oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ay ku dagaalamayaan laba malayshiyo beeleed oo halkaasi wada daga.
Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobal Hiiraan ayaa ku baaqay xabbad joojin iyo in laga wada hadlo wax yaabaha xiisaddan abuuray.
Muqdisho 10ka Abriil 2018 Hay’adda Qadar Charity ayaa degaano ka mid ah Soomaaliya ka bilowday in ay ka qeybiso cunto qalalan, taasi oo si deg deg ah lagu gaarsiinayo 6,000 qoys oo ka mid ah dadka ay abaarta ku saameysay gobolada dalka.
War saxaafadeed ay soo saartay Qatar Charity ayaa waxa ay ku sheegtay in cuntada qalalan ee loo qaybiyey 670 qoys oo ay saameeyeen Abaarta, kuwaasi oo ku sugan Magaalada Baydhabo iyo meelo u dhow, waxayna noqoneysaa wajiga Koowaad ee mashruuca gargaarka.
Qatar Charity ayaa xusay in mashruuca gargaarka deg dega ah uu ka mid yahay qaybinta cunto qallalan, biyo nadiif ah oo la cabbo iyo qaybinta Bustayaal oo loogu tala galay qoysaska si looga ilaaliyo kulaylka qorraxda iyo dhaxanta habeenkii.
Sidoo kale Mashruuca gargaarka ah waxaa kaloo ka mid ah qalab caafimaad oo bixiya adeegyo caafimaad oo aasaasi ah, si loo yareeyo faafidda cudurada, waxaana ka faa’ideysanaya 2,000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhaba.
Xaaladda bani’aadamnimada ee Soomaaliya ayaa sanadkan ka sii dari karta abaarta, maadaama isbedel weyn laga dareemayo jawiga cimilada iyo saadaasha, sida lagu sheegay warbixinta caalamiga ah ee bani’aadamnimada.
Abaarta ku dhufatay dalka ayaa barakicisay Kumanaan qoys oo Soomaali ah oo ka soo barakacay dhulalka fog fog ee dalka, kuwaasi oo wata caruur yaryar iyo dad Da’ah oo aanan heysan daryeel wanaagsan.
Nigeria 10ka Abriil 2018 Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in uu isku soo sharraxayo mar labaad doorashooyinka madaxtinimo ee lagu wado in laqabto sanadka soo socda.
Buhari ayaa arrintan shaaciyey ka dib markii uu shir la qaatay xisbiga horumarinta oo uu ka tirsanyahay waxaa uuna sheegay in uu doonayo in xilka uu isku soo sharraxo mar labaad, Buhari ayaa da’diisu tahay 75 sano jir.
Doorashooyinka madaxtinimo ee Nigeria ayaa lagu wadaa in la qabto bisha Febraayo ee sanadka 2019.
Waxaa la sheegaa in madaxweyne Buhari uu ka sheeganayo dhibaatooyin caafimaad, taasi oo keentay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu san tagin madaxtooyada, waxaana lagu daaweynayaa magaalada London ee dalka UK.
Dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa ugu baaqay Buhaari in uu xilka ka tago sababao la xiriira xaaladdiisa caafimaad.
The Best Song by Somali Musicians telling Members of the Federal Parliament table a motion to fire #Somalia's failed President his Excellency Mohamed Abdillahi Farmajo and his failed government after exposing his endless failures and lies
Qaali Ladan, Nadar Cilmi iyo Ikran Ozil oo hees ku habaaray Madaxweyne Farmaajo, 2018
WARARKA MAANTA 9ka Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Maxuu u diiday inuu iscasilo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Prof. Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo ku adkaystay inay sharci-darro tahay moshinka uu soo maleegay khaa;inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo ay beesha beesha caalamka diiday inay wax dhaqaalo ah siiso xukuummaddan fashilantay? Goorma ayuu iscasilayaa khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo ku fashilmay hoggaanka dalka iyo musuqmaasua baahsan ee heshiisyada qarsoodiga ah? Maxay Dowladda Soomaaliya uga aamusan tahay xadgudubka ay Dowladda Kenya ka dhex samaynayso Balad-Xaawo ayagoo gudaha xuduudka Soomaaliya ka dhex dhisaya darbi si ay ula wareegaan shidaalka badda Soomaaliya ee dhanka badda taasoo ay maxkamadda caalamiga u guda gashay dacwada badda si loo joojiyo dhaca ay wado Dowladda Kenya? Yaa maanta diidi kara inay madaxda dalka ku fashilantay hoggaanka dalka? Yaa noqon doona Guddoomiya soo socda? Maxayse isku haystaan guddoomiyayaasha aqalka hoose? Meeqo lacag ah ayuu khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre siiyey Guddoomiye ku-xigeenka koowaad Muudeey si xilka looga qaado Guddoomiye Jawaari kadibna la saxiixo heshiisyada qarsoodiga ah ee shirkaddaha shisheey iyo dowladdahooda sida qarsoodiga ah loola galaayo?
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Waxaa dib loo furay guud ahaan wadooyinka Magaalada Muqdisho, kadib markii uu is casilay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka ayaa xalay saq dhexe xiray wadooyinka Magaalada Muqdisho, maadaama la filayay in maanta uu dhaco kulanka Baarlamaanka oo codka kalsoonida loogu qaadi lahaa Gudoomiye Jawaari, balse inta uusan kulanka furmin is casilay.
Ciidamada ayaa laga qaaday wadooyinkii ay xireen, waxaana hada dib u soo laabtay isu socodka gaadiidka dadweynaha oo maalmihii dambe la kulmayay culeysaad ku aadan wadooyinka oo si joogto ah loo xirayay.
Shacabka Muqdisho ayaa dhibaato adag ku qabay xaaladaha cakiran ee ka taagnaa wadooyinka Magaalada tan iyo markii 14-kii Bishii March uu soo bilowday arrimaha la xiriira Mooshinka Gudoomiyihii Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari).
Hiiraan 9ka Abriil 2018 Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maalmihii dambe ku sugnay Magaalada Beladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kulamo Kala duwan la qaadanaya odoyaasha dhaqanka ee ka soo jeeda beelaha daga gobolkaasi kuwaas oo ka cabanaya xil ka qaadis lagu sameeyay xubno ka tirsan maamulka gobolka.
Sidoo kale Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa wada xal u raadinta muran xoogan oo ka dhashay qaabka loo qaado canshuurta iyo halka ay ku baxdo.
Waare oo safarkiisa Beladweyne u qorsheeyay laba maalmood ayaa hadda magaalada ku sugan maalmihii qorshuhu ahaa maalmo ka badan, iyadoona Madaxweynaha la sheegay in uu la kulmay culeysyo Kala duwan
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Wararka aan ka heleyno Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in xiligan kulamo kala duwan oo xasaasi ah ka socdaan Vilal Soomaaliya, kulamadan ayaana xoogooda looga hadlayaa is casilaada Jawaari.
Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka socdaan kulamo looga hadlayo is casilaada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Jawaari iyo tilaabooyinka xiga ee dowlada qaadeyso.
Waxaa sidoo kale kulamo ka socdaan Xarunta Villa Hargeysa oo ah halka uu dagan yahay kuna shaqeeyo Gudoomiyihii Baarlamanaka Soomaaliya Jawaari, waxaana halkaasi Jawaari kulamo kula leeyahay xubno kala duwan.
Jawaari ayaa lagu soo waramayaa in kulamo la leyahay qaar kamid ah Xildhibaanadii taageersanaa kuwaa uu ku qancinayo is casilaadiisa, waxa uuna Xildhibaanada u sheegay in go’aankaasi laga maarmaan noqotay in uu qaato.
Sida aan Wararka ku henay Xildhibaanada Kooxaha Damul Jadiid iyo Daljir ayaa ka carooday is casilaada Jawaari, waxaana Xildhibaanadan oo saakay isku balan saday in kulanka Baarlamaanka foodo ka kiciyaan lama filaan ku noqotay Iscasilaada Jawaari.
Is Casilaada Gudoomiyaha Baralamaanka Soomaaliya ayaa timid kadib kulamo saacado badan qaatay oo xalay Madaxweynaha Soomaaliya la yeeshay Jawaari kuna qanciyay in uu is casilo.
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Waxaa baaqday kulankii Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee saakay lagu waday in uu ka dhaco Xarunta Golaha Shacabka ee Magaaladda Muqdisho.
Guddoomiye ku-xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey ayaa shalay gelinkii dambe xildhibaanada u kala diray fariin ah in maanta oo Isniin ah uu jiro kulanka Baarlamaanka, Ajandihiisana uu yahay cod u qaadista Mooshinka ka yaalla Guddoomiye Jawaari.
Sida ay inoo sheegeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaa kulan wada qaatay Madaxweynaha Soomaaliya, Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaliya, iyo Labadiisa ku xigeen,kuwaasi oo go’aamiyay in kulanka la baajiyay markii 3-aad.
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, guddoomiyahii golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii uu hayey.
guddoonka golaha shacabka ayaa xaqiijiyey in Jawaari uu is casilay kadib markii uu cadaadiska ku batay iyo isaga oo go’aansaday inuu ka tago dhaxal ah inaan la xumeyn waxqabadkiisa Shantii sano ee lasoo dhaafay.
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Wararka aan ka heleyno Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in xiligan kulamo kala duwan oo xasaasi ah ka socdaan Vilal Soomaaliya, kulamadan ayaana xoogooda looga hadlayaa is casilaada Jawaari. Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka socdaan kulamo looga hadlayo is casilaada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Jawaari iyo tilaabooyinka xiga ee dowlada qaadeyso.
Is Casilaada Gudoomiyaha Baralamaanka Soomaaliya ayaa timid kadib kulamo saacado badan qaatay oo xalay Madaxweynaha Soomaaliya la yeeshay Jawaari kuna qanciyay in uu is casilo
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, waxaana kulankan uu yahay mid xiisad siyaasadeed wata oo aad dadka shacabka ah ay u hadal hayaan.
Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey ayaa shalay gelinkii dambe xildhibaanada u kala diray fariin ah in maanta oo Isniin ah uu jiro kulanka Baarlamaanka, Ajandihiisana uu yahay cod u qaadista Mooshinka ka yaalla Guddoomiye Jawaari.
Maanta waxay u badan tahay in xildhibaanada ay codka kalsoonida u qaadaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, maadaama tiro Saddex jeer ah uu baaqday kulanka Baarlamaanka, kadib markii lagu kala tagay buuq iyo muran siyaasadeed.
Ciidamada ammaanka ayaa xalay saq dhexe waxa ay xireen wadooyinka waa weyn ee Muqdisho, gaar ahaan waxaa aad lo adkeeyay ammaanka wadada Maka Al-mukarama oo gasha Madaxtooyada.
Dadka shacabka ah ayaa aad u hadal haya kulanka maanta ee xildhibaanada, waxaana laga cabsi qabaa in maanta uu gacan ka hadal ka dhaco xarunta Golaha Shacabka, maadaama xildhibaanada ay laba u kala qeybsan yihiin.
Muqdisho 9ka Abriil 2018 Wasaaradda Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ka soo saartay Boorsooyin lacag laga soo buuxiyay oo lagu qabtay Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, warsaxaafadeedka ayaa sidaan u qornay.
Shalay barqadii abbaaro 11:40am waxaa Garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho soo caga dhigatay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737.
Diyaaraddan waxyaabaha ay sidday waxaa kamid ahaa 3 boorso aan calaamadeysnayn. Hawl wadeennada garoonka ayaa sida caadada ahaydba waxa ay marsiiyeen baaritaan.
Shaqaalaha garoonka oo ka shakiyay boorsooyinka ayaa waxa ay xiriir la sameeyeen qeybta la dagaallanka argagixisada ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Wasaraadda Amniga Gudaha waxa ay caddeynaysaa in aysan jirin wax xadgudub ah oo ka dhacay garoonka intii lagu guda jiray baaritaanka iyo lasoo wareegidda boorsooyinka.
Waxaa jira waddamo aan xiriir la leenahay oo taakuleeya Dowladda Federaalka iyo laamaheeda kala duwan, balse taakuleynta dhaqaale waxaa Dowladda loo soo marsiiyaa habraac waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xiriira isu-gudbinta lacagaha.
WARARKA MAANTA 5ta Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Goorma ayuu iscasilayaa khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo ku fashilmay hoggaanka dalka iyo musuqmaasua baahsan ee heshiisyada qarsoodiga ah? Maxay Dowladda Soomaaliya uga aamusan tahay xadgudubka ay Dowladda Kenya ka dhex samaynayso Balad-Xaawo ayagoo gudaha xuduudka Soomaaliya ka dhex dhisaya darbi si ay ula wareegaan shidaalka badda Soomaaliya ee dhanka badda taasoo ay maxkamadda caalamiga u guda gashay dacwada badda si loo joojiyo dhaca ay wado Dowladda Kenya? Yaa maanta diidi kara inay madaxda dalka ku fashilantay hoggaanka dalka? Yaa noqon doona Guddoomiya soo socda? Maxayse isku haystaan guddoomiyayaasha aqalka hoose? Meeqo lacag ah ayuu khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre siiyey Guddoomiye ku-xigeenka koowaad Muudeey si xilka looga qaado Guddoomiye Jawaari kadibna la saxiixo heshiisyada qarsoodiga ah ee shirkaddaha shisheey iyo dowladdahooda sida qarsoodiga ah loola galaayo?
Guddoomiya Mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo wareysi siiyey idaahacadaha kala duwan ee dalka anagoo videogan https://www.youtube.com/watch?v=QryUEtI6xIg
Muqdisho 5ta Abriil 2018 Waxaa warar dheeraad ah laga helayaa dagaal Ciidanka Jubbaland iyo xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ku dhexmaray degmada Afmadow oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Al-shabaab ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen fariisimo Ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaatay laba saacadood.
Ciidanka Jubbaland ayaa iska difaacay raggii weerarka ku soo qaaday, waxaana dagaalka dhexmaray labada dhinac uu geystay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labadan garab.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in Madaafiic ay isku adeegsadeen dhinacyadii dagaalamay, kuwaasi oo ku dhacay meelo banaanka ka ah degmada Afmadow.
Saraakiisha Ciidanka ammaanka Mamaulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raadjoogaan halkii ay ka yimaadeen raggii weerarka soo qaaday ee Shabaabka ka tirsanaa.
Ururka Al-shabaab oo weerarkan ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin Ciidanka Jubbaland, ayna ku dileen Ciidan ay ku jiraan kuwo Kenyan ah
Minneapolis 5ta Abriil 2018 Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa waxaa uu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Golaha shacabka Soomaaliya oo u kala qeybsan labo garab oo qeyb ka mid ah taageero ka heysato Xukuumadda ayaa sheegay in Madaxtooyada Soomaaliya ay dooneyso in sababta mooshinka ay gadaal uga riixeyso tahay in ay helaan Nin ay sidii ay doonaan ka yeelan karaan.
Samatar waxaa uu sheegay in Ragga hadda haya Talada dalka gaar ahaan Ra’isalwasaaraha iyo Maadxweynaha ay xilligan ka fakarayaan sidii ay muddo dheer dalka u sii maamuli lahayeen muddo dheer.
Waxaa uu soo jeediyay in kulan dhex dhexaad ah oo lagu kala baxo la qabto,kaas oo uu shir guddoominayo qof ay ku kalsoonyihiin labada dhinaca.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay Guddoomiayaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullahi in uu shir guddoomiyo kulanka islamarkaana dhinacyada iska soo horjeeda ay codadkooda la yimaadaan madasha ciddii laga badiyana ay iska tagto
Muqdisho 5ta Abriil 2018 Xildhibaanada la magac baxay badbaadada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa wax laga xukumaado ku tilmaamay in Ilaalada laga kaxeysto Afhaheenka Golaha Shacabka mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo lagu eedeeyay in ciidamo badan oo uu watay ay la wareegeen shalay xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa dhankiisa iska foogeeyay in uu asaga ay ka amar qaadanayeen ciidamadii lawareegay shalay Xarunta Golaha Shacabka.
Jawaari wuxuu yiri ”11 Askari oo ilaalo ii aheyd ayaa leyga soo reebay afaafka hore ee Xarunta Golaha shacabka, gudaha xaruntana waxaan ugu imid ciidamo tiro ahaan badan oo qalabeysan, oo dhowr dareys kala wata, marka ciidamadaas tirada badan miyaan aniga hogaaminayay, caqliga caadiga ah ayaa diidayo ayuu yiri Gudoomiye Jawaari.
Taliyaha ciidamda xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay ciidankii hubka la galay xarunta Golaba Shacabka Shalay, waxaana xusid mudan in xarunta Golaha Shacabka ay buuxeen Ciidanka iskuugu jiro Boolis, Milateri, Nabad sugid iyo AMISOM, halka markii hore xarunta Golaha Shacabka ay ilaalin jireen Ciidamo isugu jiro Booliis iyo AMISOM.
Muqdisho 5ta Abriil 2018 Xog hoose ayaa sheegaya taliska ciidamada Xoogga dalka uu la noqday ciidamadii milateriga ee ilaalada u ahaa guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari).
Ciidankan ayaa lagu heystaa inay qeyb ka noqdeen falkii shalay ka dhacay xarunta Baarlamaanka, iyadoo la sheegay in taliska Milateriga uu dhammaan qabqabtay ciidamo la sheegay inay qabsadeen xarunta Baarlamanka oo ka tirsanaa ilaalada xarunta Villa Hargeysa.
Ilaaladii Guddoomiye Jawaari ee milateriga ahaa, kana tirsanaa ururka 60aad ayaa la sheegay in laga qaaday xalay xarunta Guddoomiye Jawaari ee Villa Hareyesa.
Sidoo kale, warar laga soo xigtay Saraakiisha miateriga qaarkood ayaa sheegaya in ciidamada milateriga ee ilaalada u ah Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamanka Mahad Cabdalla Cawad iyana lala noqonayo saacadaha soo socda.
Labadan masuul ayaa ciidamada lagala noqday waxaa loogu bedeli doonaa Ciidamo kale oo aan ka tirsaneyn xoogga dalka sida Saraakiisha milateriga laga soo xigtay inkastoo aysan sheegin halka ay ka iman doonaan.
Taliyaha ciidanka Xoogga dalka Jen. Gorod ayaa shalay sheegay in ciidamada gudoomiye Jawaari ku qabsaday xarunta Baarlamanka ay ahaayeen ciidamo aan u diiwaan gashaneyn dowlada, balse baaritaan la sameeyey ayaa markii dambe lagu ogaaday iney ka tirsanaayeen Milateriga.
Maraykanka 5ta Abriil 2018 Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay muddo kordhin lagu sameeyay xaaladda deg degga ah ee uu mareykanka saaray Soomaaliya sanadkii 2010kii.
Arrintan waxaa ay la xiriirtaa walaaca Mareykanka ee Argagixisada iyo Burcad Badeedda,waxaana xaaladda ay Soomaaliya ku jirto Mareykanka uga diiwanageshan tahay deg deg taas oo dhaceysay Bisha May ee soo socota.
Madaxweyne Trump ayaa arbacadii saxiixay muddo kordhin halsano ah oo lagu sheegayo in halista Argagixisada iyo Burcad Badeedda Soomaaliya ay wali taagan tahay.
Waraaqda ka soo baxday aqalka Cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay xaaladdan la soo rogay Sanadkii 2010kii,dhowr jeerna la kordhiyay iyada oo xaaladda deg degga ah ee ugu dambeysay ay dhaceyo Bishan April.
Mareykanka ayaa dagaal kula jira Xarakada Al-shabaab,waxaana inta badan uu geystaa weerarro u badan dhinaca cirka oo ay fuliyaan diyaraadaha aan duuliyaha lahayn.
Taliska Mareykanka ee Qaaradda Afrika ayaa sheega in iyaga oo la shaqeynaya dowladda Federaalka ah iyo AMISOM ay howlgallo ka dhan ah AL-shabaab ka fuliyaan Soomaaliya.
Muqdisho 5ta Abriil 2018 Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Gen. C/wali Jaamac Xuseen (Gorod) ayaa ka hadlay dhacdadii shalay ee xarunta Golaha Shacabka, taasi oo sababtay inuu baaqdo kulankii Baarlamaanka.
WARARKA MAANTA 4ta Abriil 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Maxaa ka cusub Xarunta Golaha Baarlamaanka? Goorma ayuu iscasilayaa khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo ku fashilmay hoggaanka dalka iyo musuqmaasua baahsan ee heshiisyada qarsoodiga ah? Maxay Dowladda Soomaaliya uga aamusan tahay xadgudubka ay Dowladda Kenya ka dhex samaynayso Balad-Xaawo ayagoo gudaha xuduudka Soomaaliya ka dhex dhisaya darbi si ay ula wareegaan shidaalka badda Soomaaliya ee dhanka badda taasoo ay maxkamadda caalamiga u guda gashay dacwada badda si loo joojiyo dhaca ay wado Dowladda Kenya? Yaa maanta diidi kara inay madaxda dalka ku fashilantay hoggaanka dalka? Yaa noqon doona Guddoomiya soo socda? Maxayse isku haystaan guddoomiyayaasha aqalka hoose? Meeqo lacag ah ayuu khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre siiyey Guddoomiye ku-xigeenka koowaad Muudeey si xilka looga qaado Guddoomiye Jawaari kadibna la saxiixo heshiisyada qarsoodiga ah ee shirkaddaha shisheey iyo dowladdahooda sida qarsoodiga ah loola galaayo?
Guddoomiya Mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo wareysi siiyey idaahacadaha kala duwan ee dalka anagoo videogan ka soo xiganay Somali Cable
Muqdisho 4ta Abriil 2018 xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Baarlamaanka ee Mooshinku ka yaalo iyo kuxigeenkiisa labaad ciidamo ilaalo u ah la galeen xarunta golaha shacabka. Xildhibaanada iyo Gudoonka ayaa horey looga mamnuucay in ciidamo lasoo galaan gudaha xarunta, hasa ahaatee waxaa amarkaas ka biyo diiday Jawaari iyo kuxigeenkiisa labaad oo ciidamo ilaalo u ah gudaha ula galay xarunta Baarlamaanka.
Waxaa hada gudaha xarunta Baarlamaanka ka taagan xiisad ka dhalatay ciidamada hubeesan ee wataan Jawaari iyo Cawad, waxaana arintan ka biyo diidsan xildhibaano badan oo sharci daro ku tilmaamau in hal dhinac ciidamo lasoo galaan xarunta.
Xarunta Baarlamaanka waxaa ka socda kulamo ay leeyihiin saraakiisha laamaha amaanka iyo Gudoonka Baarlamaanka, waxaana looga hadlayaa sidii ciidanka ay wataan Jawaari iyo Cawad xarunta looga saari lahaa.
Sida aan Wararka ku helnay Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka sidoo kale ah sii hayaha xilka Gudoomiyaha Cabdiweli Muudey ayaa isna ku sugan xarunta Baarlamaanka, waxaana la sheegay in xarunta uu galay isaga oon ilaalo hubeesan la socon.
Kulankla Baarklamaanka ayaan wali furmin, waxaana wali Xildhibaanada safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay u gali lahaayeen xarunta golaha shacabka oo saacadaha soo aadan ka furmayo kulamo iska soo horjeeda.
Kursiga Gudoonka Baarlamaanka ayaan wali la sheegin cid ku fadhiisatay, waxaana kursiga ilaalo ka ah ciidamo gaar ah oo katirsan booliiska Soomaaliya, waxaana la ogeyn cida loo ogolana doono Jawaari iyo Muudey in kursiga shir gudoonka ku fariisto.
Muqdisho 4ta Abriil 2018 Ciidanka Xooga dalka, Booliska, hay’ada nabad sugida iyo ciidanka asluubta ayaa si wada jir ah u soo saaray warsaxaafadeed ay kaga hadlayaan kulanka beri u furmi doona baarlamaanka.
Laamaha amnigu waxay u soo jeediyeen xubnaha Golaha shacabka inay u hogaansamaan sharciga ayna dhowraan kala dambaynta.
Muqdisho 4ta Abriil 2018 Xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka tirsan Baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xarunta Golaha Shacabka ay xiligan soo gaadheen ina ka badan 180 xildhibaan lana sugayo in ay intaas ka sii bata si codka kalsoonida loogu qaado gudoomiye jawaari
Xildhibaanada xarunta Golaha Shacabka wakhti hore tagey ayaa waxa ay yihiin kuwa Mooshinka ka wada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheeh Cusmaan (Jawaari).
Sida lagu balansan yahay xarunta Golaha Shacabka saakay waxaa ka dhacaya kulanka xildhibaanada ay codka kalsoonida ugu qaadayaan Mooshinka ka yaalla Guddoomiye Jawaari, inkastoo laba Ajande loo kala diray xildhibaanada.
Muqdisho 4ta Abriil 2018 Wararka aan ka heleyno xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Baarlamaanka ee Mooshinku ka yaalo iyo kuxigeenkiisa labaad ciidamo ilaalo u ah la galeen xarunta golaha shacabka.
Xildhibaanada iyo Gudoonka ayaa horey looga mamnuucay in ciidamo lasoo galaan gudaha xarunta, hasa ahaatee waxaa amarkaas ka biyo diiday Jawaari iyo kuxigeenkiisa labaad oo ciidamo ilaalo u ah gudaha ula galay xarunta Baarlamaanka.
Maamulka Koonfur Galbeed 4ta Abriil 2018Wasiirka Dastuurka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C/llaahi Sheikh Xasan oo shir jiraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaga hadlay khilaafka ka dhex taagan Golaha Shacabka.
C/llaahi Sheikh Xasan ayaa ku baaqay in mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari sharciga lagu kala baxo lana joojiyo fowdada laga dhex wado Golaha Shacabka.
Sacuudiga 4ta Abriil 2018 Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in Xuutiyiinta Yemen ay badda cas ku weerareen Markab nooca shidaalka qaada oo halkaasi marayay.
Afhayeen u hadlay isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga oo in muddo ah dagaal kula jiray Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in waxyeelo ay soo gaartay markabka, balse halkaasi uu kasii ambabaxay.
Xuutiyiinya Yemen ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen maraakiib dagaal oo ay leeyihiin isbaheysiga Sacuudiga.
Falkan ayaa dhacay iyadoo hey’adda Qaramada midoobay ay ku howlantahay shir dhaqaale loogu uruurinayo xaaladda baniaadanimo ee dalkaasi.
Xoghayaha guud ee Qamada midoobay, Antonio Guterres ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahaadalada nabadadda ee yemen.
Marayana 4ta Abriil 2018 Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu wacad ku maray in xadka koonfureed ee waddankaasi uu la wadaago Mexico uu u dirayo ciidammo milateri ah si ay xadkaasi u ilaaliyaan.
“Qaab milateri ayaannu arrintan wax uga qabanaynaa,” ayuu Mr Trump Talaadadii ka sheegay Aqalka Cad, waxa uuna intaasi ku daray inay taasi noqon doonto “tallaabo weyn”.
WARARKA MAANTA 27ka Maarso 2018 Sir Culus!
Muqdisho 27ka Maarso 2018 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa saakay xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga wuxuu kula kulmayaa saraakiishii Dhalinyarada aheyd ee dhawaan loo dhiibay hoggaanada qaar ee Ciidanka.
Bilowgii bishan ayaa waxaa isbedel lagu sameeyay 13 Sarkaal oo ka tirsan Millitariga Soomaaliya oo gaboobay ama Odayaal noqday, waxaana lagu bedelay dhalinyaro aqoon leh oo dhawaan ku biirtay Ciidanka Xoogga dalka, kuwaasi oo tababar ku soo qaatay dalka Dibaddiisa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Dhalinyaradan kulan gaar ah Jimcihii ina dhaaftay la qaatay, wuxuuna weydiiyay in ay u sheegaan baahiyaha ay qabaan iyo wax walba oo ay u baahan yihiin, si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah ururka Al-shabaab.
Intaasi kadib Madaxweynaha ayaa dhalinyaradan u sheegay inuu si deg deg ah uga jawaabi doono arrimihii ay u bandhigeen, waxaana saakay la filayaa inuu ka jawaabo cadsiyadii Dhalinyaradan ay u gudbiyeen.
Kulanka saakay Madaxweynaha uu la qaadan doono saraakiishan Dhalinyarada ah ayaa waxaa goobjoog ka noqon doona Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Gen. Gorod iyo Saraakiisha Millitariga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan howlihiisa shaqo u wareejiyay xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, si uu u dhiiro-geliyo Ciidamada Xoogga dalka iyo in uu la socdo xaaladahooda.
Dhalinyaro badan ayaa ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo u baahan dhiiragelin Xooggan in loo sameeyo, maadaama ay yihiin kuwa dalka iyo dadka naftooda u huray.
Australia 27ka Maarso 2018 Australia ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyey ee erya diblumaasiyiinta Ruushka, taas oo jawaab u ah wareerarkii loo isticmaalay sunta neerfaha waxyeellaysa ee ka dhacay dalka Britain.
Muqdisho 27ka Maarso 2018 Ciidamadda amaanka gaar ahaan kuwa Hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya ayaa dekedda muqdisho ku qabtay Konteenar ay ku jireen waxyaabaha maanka dooriya gaar ahaan Qamri.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in gudaha dekedda muqdisho ay ciidamada Nisa ay ku qabteen konteener ay ku jireen qamri
“Ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa nisa ee ka howlgala gudaha dekeda muqdisho ayaa gacanta ku dhigay konteenerkaan oo ay ku jireen qamri”,
Saraakiisha Hay’adda Nisa waxa ay xaqiijiyeen in qamrigaan la rabay in gudaha Magaalada Muqdisho lagu iibiyo iyagoona ay ciidamada ka hortageen.
Muqdisho 27ka Maarso 2018 Qaar ka mid Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa saakay xiran, iyadoona Amniga Magaalada ay si weyn u adkeeyeen ciidamada Ammaanka.
Isgoyska Tarabuunka, iyo dhammaan Wadooyinka soo gala Golaha Shacabka ayaa xiran, iyadoona halkaasi lagu daadiyay ciidamo dheeraad ah.
Qaar ka mid ah Shacabka Muqdisho ayaa sheegay in sidoo kale ay maanta xiran yihiin qeybo ka mid Jidka Makah Almukaramah.
Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay martigelisay qaraxyo ay ku dhinteen dad badan
China 27ka Maarso 2018 Tareen la rumaysan yahay in uu saaran yahay masuul sare oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay ayaa tagay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, sida ay ku warrantay warbaahinta Japan.
Warbaahinta Bloomberg ayaa sheegtay in qofka saarnaa uu ahaa Kim Jong-un laftirkiisa waxayna soo xigteen saddex ilood oo aysan magacaabin.
Shiinaha ayaa ah dalka wayn ee kali ah ee xulafada la ah Kuuriyada Waqooyi – laakiin calaaqaadkooda waxaa gaabis ka dhigay qorshaha nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Waxaa loo arkaa in Kim uusan dalkiisa ka bixin tan iyo markii uu xilka la wareegay toddoba sano ka hor.
Ma jiraan warar rasmi ah oo safarka Kim ku saabsan oo la shaaciyay, warbaahinta Shiinaha iyo midda Kuuriyada Waqooyina kama aysan hadlin, haddiise ay dhacdo in uu safarkaas galay waxaa loo arki doonaa hormar wayn oo laga sameeyay dhanka dublamaasiyadda.
“Dawladdu waxay si dhaw ula xiriiraysaa dawladaha ku haboon waxayna qiimaynaysaa xaaladda” ayuu yiri afhayeen u hadlay Kuuriyada Koonfureed.
Muuqaal ay soo bandhigtay warbaahinta Nippon News Network ee fadhigeedu yahay Tokyo ayaa muujinaya tareen liidmo jaale ah leh. Warbaahintaasina waxay intaas ku dartay in uu u egyahay midkii uu Kim abaahihii Kim Jong-il isticmaalay markii uu Beijing booqday sannadkii 2011kii.
Kim Jong-il booqashadiisana waxaa la xaqiijiyay oo kali ah markii gaaray Beijing.
Qof dukaan ku hor leh boosteejada tareenka ee Beijing ayaa sheegay in uu Isniintii arkay xaalad ka duwan wixii uu arki jiray.
Baydhabo 27ka Maarso 2018 Maamulka deegaanka Goofgaduud Buurey ee gobolka Baay ayaa sheegay in ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ay Al-shabaab kala wareegeen deegaanno ku dhow deegaankaasi.
Guddoomiyaha deegankan Maxamed Aadan ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan, islamarkaana ay qaadeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed.
Waxa uu sheegay guddoomiyaha in ciidamada ay hadda gacanta ku hayaan fariisimo Al-shabaab ku lahaayeen deegaanno hoostaga Goofgaduud, islamarkaana ay ku sugnaan doonaan.
“Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa sameeyey howlgallo qorsheysan, waxaana ay la wareegeen deegaanno dhowr ah iyo meello ay ku sugnaayeen nabad diidka, khasaarena waa lasoo gaarsiiyey”
Guddoomiyaha ma aanu sheegin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay, hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa xoojiyey howlgallada ka dhanka ah Al-shabaab.
Soomaaliya Iyo Keenya 27ka Maarso 2018 Waxaa maanta oo Talaado ah lagu wadaa in ay kulmaan Masuuliyiin ka tirsan Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, si ay uga wada hadlaan dhibaatada ka taagan Magaalada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay wada hadalka maanta dhacaya in heshiis rasmi ah looga gaarayo dhibaatada ku soo laaba laabatay xuduuda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Dhinaca kale Jubbaland oo arrintan ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay xiisada ka taagan Magaalada Beled Xaawo in ay masuul ka tahay Dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka Koowaad ee Maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in Doowladda Soomaaliya ay ka gaabisay masuuliyadii uga aadaneyd heshiisyo iyo kulamo horey u dhaxemaray labada dal.
“Waxaan ugu baaqayaa xuduuda labada dal buuqa ka taagan in xiisadeeda la dejiyo, xalna aan raadineyno, xuduuda arrimaheeda waxaa waajib uu ka saaran yahay Dowladda, qaladaadka dhacaya waxaa masuuliyadeeda leh Dowladda Dhexe.” Ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi (Farmaajo) ayaa shalay joojiyay dhismaha darbiga Kenya ay ka wado xuduuda u dhaxeysa Magaalooyinka Mandhera iyo Beled Xaawo, kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen isaga iyo Uhuru Kenyatta.
Maamulka Jubbaland 27ka Maarso 2018 Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ku laabtay magaalada kismaayo ka dib markii uu ka soo labtay dalka dibadiisa uu ugu maqnaa howlo shaqo ayaa si adag uga hadlay arinta ku saabsan darbiga ay dowlada Kenya ka dhisayo xuduudka labada dal gaar ahaan degmada beled xaawo.
Maxamuud sayid adaan ayaa sheegay in ay dowladda Kenya kala hadleen in ay joojiso dhismaha ay ka wadaan badhtamaha magaalada sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenku.
Muqdisho 27ka Maarso 2018 Xukumada Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii Xilka looga tuuri lahaaa Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, oo Xildhibaanno ka tirsan Golaha ay Mooshin ka gudbiyeen. Maalmihii dambe ayaa waxaa sii xoogeysanayay khilaafka u dhaxeeya Hay`adaha Sharci dajinta iyo Fulinta, taas oo hadda la tilmaamayo in hay`ada fulinta ay waddo balanqaadyo ay u fidineyso qaar ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya, si meesha looga saaro Gudoomiye Jawaari.
Xildhibaan Daahir Cabdi Cabdulaahi oo loo yaqaano Dr.Go, kana tirsan xubnaha Golaha Shacabka oo la hadlay Idaacada Kulmiye ayaa xukumada fedraalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay ku soo jiitaan xildhibaanada isla markaana ay bixinayaan balanqaadyo ku aadan xilal iyo lacago.
Xukuumadda Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay Xilal u balanqaaday Xildhibaanadda si ay u ridaan Gudoomiyaha Golaha Shacabka
Dubia 27ka Maarso 2018 Raisulwasaarihii Hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ayaa ka hadlay Mooshinka dhawaan laga keenay Gudoomiyaha Golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan (Jawaari).
Cumar Cabdirashiid oo ku sugan magaalada Dubaia ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa isaga oo ka hadlay aragtidiisa khilaafka Baarlamaanka waxaa uu sheegay in uu ku talinayo arintaan in lagu dhameeyo wada hadal, haddii laga fursan waayana loo maro dariiqa sharciga iyo xeer hoosaadka baarlamaanka.
‘’Runtii Arintaasi waa arin u baahan in si dhaqse ah loo xaliyo, waayo haddii ay soo jiitanto waxaa ay cuuryaamin kartaa howlihii golayaasha dowladda, haddi ay taa suurtal noqon weysanaya waxaa Haboon in cod loo qaado sida uu xeer hoosaadka iyo dastuurku qabo’’ ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Khilaafka u dhaxeeya Baarlaamaanka Soomaliya oo soo bilowday bishaan bilowgeeda ayaa haatan ah mid cirka isku sii shareeray, kadib markii Guddoonka ay isku qilaafeen waqtiga la qaban doono Mooshinka Jawaari.
WARARKA MAANTA 26ka Maarso 2018 Sir Culus!
Ruushka 16ka Maarso 2018 Ugu yaraan 37 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen xarun laga dukaamaysto oo ku taal magaalda Kemerovo ee Siberia.
Warbaahinta Ruushka ayaa sheegaysa in tobonaan dad ah oo ay kamid yihiin caruur la la’yahay.
Dabka ayaa ka bilowday dabaqa afaraad ee dhismaha lagu magacaabo Winter Cherry complex, dadka ku waxyeelloobay dabkaan ayaa lagu soo warramayaa in badan koodu ay ku jireen shaneeemo.
Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayey qiiq ka baxaya daaqadaha iyadoo dadka qaabilsan dab damiska ay isku dayayeen in ay badbaadiyaan dadka iyo hantida.
Kemerovo, ayaa ah deegaanka ugu weyn ee laga soo saaro dhuxusha, deegaankaan ayaa magaalda Moscow ka xiga dhanka bari qiyaastii 3,600km (2,200 miles).
Dhismaha oo la furay sanadkii 2013 ayaa ka koobnaa makhaayado, meelo shaneemooyinka lagu daawado iyo sidoo kale meelo ay caruurtu ku ciyaaraan.
Dabka ayaa la rumaysan yahay inuu ka kacay qayb ka mid ah dhismaha oo lagu madadaasho, sida ay kusoo warraymayso warbaahinta deegaanku.
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Kemerovo, Vladimir Chernov ayaa sheegay in 13 maydad ah laga helay mid kamid ah qololka shaneemada.
Sida ay sheegayaan warar hordhac ah, saqafka saree ee dhismaha ayaa kusoo dumay labo kamid ah shaneemooyinka.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tass hawl-wadeenada gargaarka dagdaga ah ayaa ku guulaystay in ku dhawaad 100 qof ay ka daad gureeyaan dhismaha, waxayna badbaadiyeen 20 kale.
Ilaa iyo hadda lama oga waxuu dabku ka dhashay balse masuuliyiinta ayaa wada baaritaan.
Muqdisho 16ka Maarso 2018 Gudoomiye Ku-xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdala Cawad ayaa ku eedeeyay Abdiwali Shiikh Ibraahim Muudey gudoomiye ku xigeenka 1-aad, in uu wado waxa loo yaqaano Jamhadeyn.
Waxa uu sheegay in qoraalka uu soo saaray muudey, uu jabiyay sharcigii u yaalay golaha shacabka, islamarkaana qoraalkiisa aysan ka war heynin guddoonka.
Shalay Abdiwali Shiikh Ibraahim Muudey gudoomiye ku xigeenka 1-aad ayaa soo saaray qoraal uu ku cadeynayo xiliga uu dhacayo Kulanka mooshinka Gudoomiye Jawaari.
Murankii u dhexeeyey Baarlamanka Soomaaliya ayaa shaley waxa uu galey dagaal adag oo dhanka waraaqaha ah oo dhex marayey hay’adihii ugu sareeyey dowlada Soomaaliya.
Qoraalkii ugu horeeyey waxaa soo saarey gudiga baaritaanka qilaafkan uu u saaray Aqalka Sare ee Baarlamanka, kaasoo faraayey gudoonka baarlamanka in loo hogaansamo dastuurka iyo sida uu qabo oo mudo 10 cisho gudaheed ah lagu horkeeno Baarlamanka
Muqdisho 16ka Maarso 2018 Qaraxaan oo dhawaqiisa laga maqlay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa ka dhacay Laamiga jidka Warshadaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhaw Jaamacada Simad.
Qaraxn xoogan ayaa goordhaweyd waxa uu ka dhacay Magaaladda Muqdisho ee caasimadda Soomaliya.
Mas’uul ka Tirsan maamulka Degmada Dayniile ayaa sheegay in qaraxu uu dhacay, wuxuuna hadalkiisa ku daray in ay wadaan baaritaano.
Ilaa haatan si dhab ah looma oga khasaaraha qaraxa.
Muqdisho 16ka Maarso 2018 Dabley hubeysan ayaa xalay fiidkii gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen nin Ganacsi ku lahaa suuqaasi, oo lagu magacaabi jiray Xuseen Kuulow.
Rag ku hubeysnaa Bastoolado ayaa beegsaday ninkan, xilli uu ku guda jiray howlihiisa shaqo, kadib Dableydii dilka geysatay ayaa goobta ka baxsaday.
Dad goobjoogayaalsha ayaa sheegay goobta uu dilka ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn in ay ku sugnaayeen Ciidamo, balse aanay ku bixin falkan.
Ehelada Marxuumka ayaa xaqiijiyay dilkan, waxayna sheegeen ilaa hadda in aysan garaneyn sababta ka dambeysa dilka Xuseen, waxayna tilmaameen inuusan weligiisa faraha la gelin siyaasad ama wax kale oo lagu beegsan karo.
Dilalka qorsheysan ayaa siyaabo kala duwan mararka qaar uga dhaca Magaalada Muqdisho iyo duleedyadeeda, inta badan dilalka nuucaan oo kale ah waxaa geysta ururka Al-shabaab.
Jahwareer dhanka amniga ah ayaa ka taagan Magaalada Muqdisho, maalmahan waxaa dhacayay dilal iyo qaraxyo, taasi oo dadka ay ku sheegeen in amniga uu saameyn ku yeeshay Mooshinka ka yaalla Guddoomiye Jawaari.
Muqdisho 16ka Maarso 2018 Maamulka degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo ayaa sheegay iney kasoo horjeedaan darbiga ay dowladda Kenya ka dhiseyso degmada B/xaawo ee gobolka Gedo.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka degmadaasi, Aadan Siraad Cali, ayaa wuxuu ku sheegay in ka maamul ahaan ay ka dhiidhiyeen waxa ka socda B/xaawo.
“Annaga ka maamul ahaan uma dulqaadan karno waxa ay dowladda Kenya ka waddo degmada B/xaawo, waxaan u aragnaa iney tahay gardarro cad, waana in wax laga qabtaa” ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka Garbahaarey.
Sidoo kale, Aadan ayaa ka dalbaday maamulka Jubbaland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya, iney degdeg wax uga qabtaan xadgudubka dowladda Kenya ee degmada B/xaawo.
Kenya ayaa darbi dheer ka dhiseysa gudaha degmada B/xaawo, waxaana ay ku sheegtay darbigan inuu yahay mid ay ku xafidayaan ammaanka xuduudda.
Muqdisho 16ka Maarso 2018 Guddoomiyaha Gobolka Gedo ee Maamulka Jubba-land ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan Degmadda Balad-xaawo, iyo dhismaha darbiga Dowladda Kenya ay dib u bilowday.
Maxamad Muxumad Maxamad Gudoomiyaha Gobolka Gedo ayaa sheegay in ay Dowladda Soomaaliya u xilsaartay in 27-ka bishaan uu la kulmo wafdi ka socda Dowladda Kenya si loo hakiyo dhismaha darbiga.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in shalay ay Qadka taleefanka kuwada hadleen Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, islamarkaana ay kawada hadleen in loo joojiyo dhismaha darbiga.
Sidoo kale Gudoomiyaha waxa uu sheegay in Maamulka Labadda dhinac loo xilsaaray in ay fadhi ka yeeshaan talaadada soo socota.
Shacabka ku dhaqan Magaaladda Beledxaawo ayaa sameeyay dibad bax maalmihii dambe ay uga soo horjeedaan tallaabooyinka Dowladda Kenya.
Maalmihii la soo dhaafay Ciidamada Kenya ayaa dhul boob xooggan ka waday Beledxaawo, iyagoo gudaha u soo galay degmadaas, si ay u dhameystiraan darbiga ay ka dhisayaan xuduud beenaadka, waxaana ay soo galeen xaafado ka tirsan Beledxaawo oo au bur buriyeen.
Muqdisho 16ka Maarso 2018 Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdala Cawad ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu ugu jawaabay qoraal ka soo baxay Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha shacabka C/wali Ibraahim Muudey.
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad Muudey ayaa shaaciyay in 31-da bishan maalinta Sabtida ah uu qabsoomi doono kulanka looga doodi doono Mooshinka ka yaalla Guddoomiye (Jawaari).
Mahad Cabdalla Cawad ayaa warqada ka soo baxday Xafiiska Guddoomiye Muudey ku tilmaamay mid aanu aheyn mid ka soo baxay Guddoonka xafiiskiisa oo loo dhan yahay,
Sidoo kale wuxuu sheegay Guddoomiye Cawad in Guddoomiye ku xigeenka 1-aad uusan go’aamin karin xilliga uu furmayo kulanka codka kalsoonida loo qaadayo Guddoomiye Jawaari, isaga oo sidoo kale tilmaamay in Jawaari uu yahay Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Mahad Cabdalla Cawad Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka ayaa sheegeen in Dastuurka iyo xeer hoosaadka Golaha Shacabka aysan waafaqsaneyn warqada ka soo baxday xafiiska Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sharci daro ku tilmaamay warqada ka soo baxday xafiiska Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey.
Xildhibaanada qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Guddoomiye Muudey uu sharciga ku xad gudbay go’aan keligiisana uu qaatay.
Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa sheegay in Guddoomiye Muudey uusan ahayn ku sime Guddoomiyaha Golaha Shacabka sharci darana ay tahay sheegashadiisa.
Khilaafka ka dhexjira Golaha shacabka BFS ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya, waxaana socda dadaalo la doonayo in lagu dhameeyo arrintan.
WARARKA MAANTA 23ka Maarso 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Ama Yaa noqon doona Guddoomiyaha Cusub ee soo socda? Ama Yaa noqon doona Madaxweynaha soo socda? Maxay kula tahay haddii madaxdii sare ee dalka Soomaaliya heshiin waayeen oo ay beesha caalamka u ogolaadeen inay kala xukunto khilaafaadkooda siyaasaddeed ee ayaga isku minjo-xaabinayaan? Maxay tahay sababta uu weli u yahay dastuurka dalka qabyo qoraal? Maxay warbaahinta ku hadasha magaca dowladda aysan xaqiiqda khilaafkan ugu soo gudbinaynin Ummadda Soomaaliyeed? Yaa u hor dacwooday beesha caalamka ee arrimaha siyaasaadda Soomaaliya soo qasaysa muddo 30 sanno ah ayagoo maalinba maalinta ka dembaysa siyaasad cusub iyo jahwareer u horseedayey Ummadda Soomaaliyeed? Maxay tahay Ciidanka Dowladda ka wada tirsan oo markasta isku dhex dagaalaya Muqdisho? Haddii ay fashilantay Xukuummaddii uu hoggaaminaayey Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo heshiisyo badan oo qarsoodi ah ula soo galay shirkado kala duwan uu hadda rabo in golaha xildhibaannadda inay kursiga ka tuuro Guddoomiyaha Aqal Hoose ee Xildhibaannadda Mudane Prof. Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo si cad u diiday inuu si qarsoodi ah u saxiixo heshiisyadda uu keenay Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre kasoo lacagtii dadweynaha u isticmaalaya dano khaas u ah ilaa iyo muddo sannad iyo bil ah? Maxaa dhici doona haddii ay golaha xildhibaannadda codka kalsooniga kala laabtaan Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre?
Muqdisho 23ka Maarso 2018 Ciidanka Booliska Soomaaliya ee sida gaarka ah loogu tababaray Baarista Qaraxyada ayaa ku hawlan Baarista Qaraxii shalay ka dhacay ka soo horjeedka Hotelka Wehliye ee ku yaalla wadada Maka Al-mukarama gaar ahaan inta u dhaxeysa isgoysyada Dabka iy Sayidka.
Saraakiil Cadaan ah oo Booliska qaybta Baaritaanada ka caawiya ayaa sidoo kale qayb ka ah hawsha Baarista ah ee socota, maadaama Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu laamaha ammaanka faray in ay warbixin deg deg ah ka keenaan qaraxaasi oo ay ku dhinteen dad shacab ah.
Ciidamada Booliska ayaa shalay gelinkii dambe la arkayay iyaga oo tagay goobtii uu qaraxa ka dhacay, kadibna calaamadeeyay agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay iyo in ay qaateen aaladaha yar yar ee biraha ah halkaasi yaallay, kana dhashay qaraxa.
Sidoo kale saraakiisha khubarada ah ee baaritaankan horkacayay ayaa la arkayay iyaga oo su’aalo ka weydiinaya arrintan shacabkii halkaasi ku sugnaa iyo Ciidamadii halkaasi ka akdhowaa.
Baaritaankaan oo ah mid caalami ah oo la mid ah midka aduunka lagu baaro Qaraxyada noocaan oo kale ah, ayaa Booliska wuxuu weli ku guda jiraa cadeynta sida ay wax ku dhaceen.
Arintan baarista ah ee socota, ayaa looga gol leeyahay in lagu cadeeyo cida leh masuuliyadda dhimashada iyo dhaawaca goobtaasi ka dhashay, maadaama wadooyinka ay yaalaan baro Kontorool oo lagu baaro Gaadiidka iyo Mootooyinka Bajaajta, la isna weydiinayo sida uu ku soo gudbay gaarigan.
Baaritaanka Booliska ay wadaan ayaa si weyn isha loogu hayaa, iyadoo la sugayo natiijada baaristaasi ka dhalata, maadaama la shaacin doono cida leh masuuliyadda dhibaatadii dhacday.
Muqdisho 23ka Maarso 2018 Gudoomiyha Xisbiga Cadaalada Hormarinta Dibuquraadiyada iyo Isqadarinta ee Cahdi Pro.Cabdiraxmaan Cabdi Qani Ibraahim oo ku sugan Dalka Turkiga ayaa ka hadlay Mooshinka laga keenay Gudoomiyha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Shikh Cismaan Jawaari. Gudoomiyha ayaa sheegay in Mooshinka uu yahay mid ay keeni karaan Xildhibaanada balse hananka loo soo maray Mooshinkaani uusan aheyn mid wanaagsan.
Pr Cabdiraxmaan ayaa Tilmaamay in Dowladda Imaraadka Carabta ay ku lug leedahay xaalada Siyaasadeed ee Dalka ka jirta,balse loo baahanyahay in halmeel looga soo jeesto sidii looga shaqeen lahaa Miidnimadda Dalka.
Gudoomiyiyaha Xisbiga Cadaalada Hormarinta Dibuquraadiyada iyo Isqadarinta ee Cahdi Pro.Cabdiraxmaan Cabdi Qani Ibraahim ayaa dhinaca kale ka Dalbaday Madaxweynaha Soomaaliya in uu ka hadlo arintaan islamarkaana Raysilwasaraha uu joojiyo Awooda uu adeegsanayo.
Muqdisho 23ka Maarso 2018 Weerarkan ayey dadka qaarkood waxay ku tilmaameen inuusan ahayn mid caadi ah. Qaar ka mid ah gabdhahaas xaaladdooda waxaa la soo sheegay in ay liidato, sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Weerarka oo ka dhacay degmada Cabdulcasiis ayuu weriye BBC ka tirsan sheegay in ay ka dambeeyeen rag saarnaa gaari aan taargo lahayn oo noociisu ahaa Toyota Noah, sida ay u sheegtay Basmo Caamir oo ah guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir.
Dad gaariga saarnaa ayaa lagu soo warramay inaya sun aan nooceeda la sheegin ku buufiyeen haweenkaas, xilli ay hawlo nadaafadeed wadeen, kuwaasoo 11 ka mid ah ay waxyeello soo gaartay, 4 ka mid ahna ay aad u liitaan.
Wariyaheennu wuxuu sheegay in hawlwadeennada caafimaadka iyo laamaha amaankaba ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan wixii dhacay, hase yeeshee wuxuu sheegay in dembi baarayaal booliska ka tirsan ay qaadeen dhacaanno, si loo ogaado nooca suntan la adeegsaday.
Waa markii ugu horraysay ee weerar sun ah loo adeegsado Muqdisho inta la ogyahay taariikhda, waxayna dad badan ka cabsi qabaan in mar kale uu weerarkaas oo kale dhaco, ayadoo aysan Soomaaliya lahayn imkaaniyaad wax looga qaban karo sunta kiimikada iyo tan bayolojiga.
Muqdisho 23ka Maarso 2018 Shirka golaha wasiirrada Soomaaliya oo uu guddoominayay Ra’iisulwasaaraha Dalka Xasan Cali Kheyre ayaa Maanta lagu ansixiyay heshiisyo dhawaan lala soo galay Dowladda Turkiga, iyadoo sidoo kale looga hadlay hannaanka caddaalada, amniga, dhaqaalaha iyo doorashooyinka 2020-ka.
Sacuudiga Iyo UAE 23ka Maarso 2018 Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa muujisay cambaareyn xooggan oo ku aadan qaraxii ka dhacay ka soo horjeedka Hotelka Wehliye ee ku yaalla inta u dhaxeysa Isgoysyada Dabka iyo Sayidka.
Shiinaha 23ka Maarso 2018 Mareykanka ayaa u muuqda in uu gunta u galay dagaal ganacsi oo kala dhaxeeya waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee Shiinaha.
Muqdisho 23ka Maarso 2018 Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiyadeeyay geerida dadkii shacabka ahaa ee shalay ku naf waayay qarax loo adeegsaday Gaari oo ka dhacay afaafka hore Hotel Wehliye ee Muqdisho.
“Aniga oo ku hadlaya magaceyga iyo kan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii qiimaha badnaa ee maanta nooga baxay qaraxii ka dhacay afaafka hore Hotel Wehliye ee Jidka Maka Al-Mukarama.
“Caddowga aan la dagaallameyno waa mid caadeystay gumaadka shacabka, waana mid adeegsanaya xeelado kala duwan oo ay kamid tahay midda maanta dhacday.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa faray laamaha amniga ee arrintan khuseyso in ay warbixin deg-deg ah ka keenaan sida walxaha qarxa ay ku soo dhaafeen baraha baarista. uuna jirayo xisaabtan dhab ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u rajeeyay shacabkii ku dhaawacmay qaraxan in uu Alle deg-deg u bogsiiyo, waxuuna sheegay in ay dowladdu si dhaw ula soconayso xaaladda bukaannada dhaawacoodu daranyahay
Beled Xaawo 23ka Maarso 2018 Magaalada Beledxaawo ee Gobolka Gedo ayaa shacabka ku nool waxa ay sameynayaan Barakac, kadib markii Ciidanka Kenya Gaadiidkooda dagaalka ay la soo galeen gudaha Magaaladaasi.
Shalay iyo maalinkii ka horeysay ayaa shacabka waxa ay dhigeen Banaanbax ay kaga soo horjeedaan falkan, Banaanbaxyada ayaa waxaa xigay Barakac ay sameynayaan shacabka halkaasi ku nool.
Dadka ayaa ka baqdin qaba dhismaha Darbiga Kenya ay ka bilowday xuduuda u dhaxeysa labada dal gaar ahaan inta u dhaxeysa magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera, waxayna shacabka ka walaac ka muujinayaan in darbigan uu saameeyo guryahooda.
Saraakiisha Ciidanka Militariga Soomaaliya ayaa Idaacadda Risaala u sheegay shacabka in ay sameynayaan Barakac, balse iyagu ay wadaan sidii arrintan wax looga qaban lahaa.
Korneel Rufle oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Millitariga ayaa sheegay in gaadiidka dagaalka Kenya ay gudaha u soo galeen magaalada, Barakacana uu bilowday kadib markii uu guul dareystay wada hadal labada dhinac u dhaxeeyay.
WARARKA MAANTA 22ka Maarso 2018 Sir Culus!
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga H.E. Amb. Ahmed Issa Awad oo shalay ka qeyb galay Shir Madaxeedka tobanaad ee gaarka ah ee Madaxda iyo Hoggaamiyeyaasha Afrika ee ku qabsoomay Magaalada Kigali ee caasimadda Rwanda, kana wakiil ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya H.E. Mr. Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmaajo” ayaa kulamo gaar gaar ah la yeeshay qaar ka mid ah Madaxda ka qeybgashay shirkaasi.
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil sheegay in C/wali Muudey uu yahay Kusimaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka, maadaama Mooshin uu ka yaallo Guddoomiye Jawaari.
Arrintan ayaa ka dambeysay markii ay dood ka dhalatay hadal ka soo yeeray C/wali Muudey oo ahaa inuu yahay Kusimaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Wasiir Xoosh oo mar walba dood ka keena arrimaha sharciyada ee la isku qabsaday ayaa waxaa uu jideeyay in C/wali Muudey yahay Kusimaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka, markii qaar ka mid ah Xildhibaanada ay ka hor-yimaadeen.
“Sida ku xusan Qodobka 8-aad ee Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka, wixii ka billowday bisha Maarso 18keedii, Mudane Cabdiwali Muuddeey aa ah kusimaha Afhayeenka Golaha Shacabka, maadaama uu Mooshin ka yaal Mudane Jawaari. Waxaa markhaati madoontaan ah in hayadaheenna dowliga/Dastuuriga ah eey qaan gaareen”. Ayuu yiri Wasiir Xoosh oo ka mid ah Wasiirada Xukuumadda, balse aan Xildhibaan aheyn.
Xiisada ka dhalatay Mooshinka ka yaalla Jawaari ayaa cirka isku sii shareertay, iyadoo labada dhinac ee Mooshinka taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda ay hadalo is sii hurinaya xiisada ay warbaahinta isugu marinayaan.
Suuriya 22ka Maarso 2018 Boqolaal ka tirsan fallaagada reer Suuriya ee ka dagaalama qeybo ka mid ah bariga Quuda iyo qoysaskooda ayaa saaka lagu wadaa in ay isaga baxaan magaalada go’doonsan magaalada ee ku taala bariga Quuda kaddib heshiis ay garwadeen ka ahayd dowladda Ruushka.
Dagaalyahannada fallaagada ayaa lagu soo waramayaa in ay aqbaleen in ay hubka dhigaan, iyagoo taa ku badalanaya in la siiyo marin nabdoon oo ay ku gaari karaan gobolka uu mucaaradka ka taliyo ee Idlib ee ku yaalla woqooyi galbeed Suuriya.
Haddii ay fallagadani baxaan, arrintan ayaa noqoneysa markii ugu horreysay oo tiro badan oo ka tirsan dagaalyahannada fallaagada laga daad gureynayo deegaanada bariga Quuda oo bishii la soo dhaafay wajahayay guluf colaadeed oo xoogan oo ay dowladda halkaasi ku haysay.
Magaalada Harasta ayaa ka go’nayd qeybaha kale ee bariga Quuta, waxaa magaaladani gacanta ku haya fallaagada Ahrar al Sham, oo hadda xaqiijisay in ay aqbashay in ay joojiso dagaalka isla markaana ay dagaalyahannadeeda banneeyaan magaaladaasi.
Heshiisyo noocani ah ayaa miiska u saarnaa laba kooxood oo kale oo kala ah Jeysh Al-Islam iyo Faylaaq Al-Raxmaan balse heshiisyadani ayaan miro dhal noqon.
Labadani kooxood ayaa ballan qaaday in ay dagaalka sii wadayaan xitaa iyaga oo dhul badan laga qabsaday laguna sii siqaya dhulka ay maamulaan.
Hoobiyeyaal ayaa wali lagu garaacayaa qeybaha ay dowladda ka maamusho magaalada caasimadda ah ee Dimishiq, iyadoo weerar dhacay maalintii talaadada ahayd uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa, waxaana weerarkaasi ku dhintay 40 qof.
Qorshaha dowladda ee ku saleysan go’doominta iyo duqeynta ayaa sanadadii la soo dhaafay soo hooyay guulo badan balse galaaftay nolasha dad badan.
Xaaladda bariga Quuta ayaa la mid ah deegaanadii horey ay u go’doomisay dowladda waxaana durbaba kumannaan qof ay doorbidayaan in ay isaga baxaan guryahooda oo ay meelo kale miciin bidaan ama dowladda ay isu dhiibaan.
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Xarunta Irshaad ee Aragti-isdhaafsiga ayaa waxa ay si wadajir ah u qabteen dood cilmiyeed ku saabsanayd kaalinta Dastuurka ee nidaaminta nolosha bulshada.
Doodda waxaa ka soo qaybgalay Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Dr Xuseen Cabdi Cilmi, Xildhibaanno, Culamada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Xubnihii masraxa saarnaa ee ka soo qaybgalayaasha u iftiiminayay mowduucca waxaa ay kala ahaayeen Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Cali Wajiis iyagoo ka jawaabayay su’aallo ay waydiiynayeen ka qaybgalayaasha.
Wasiir Xuseen Cabdi Cilmi oo furay doodda ayaa sheegay in Wasaaradda ay ka qaybqaadan doonto kulamada noocan ah.
“Waxaan marka hore bogaadinayaa Xarunta Irshaad oo dooddan agaasinkeeda kaalin wayn ka qaadatay waanan ku dhiirigelineynaa in ay joogteeyaan doodaha ceynkan oo kale ah; Wasaaradda marwalba waxay diyaar u tahay ka qaybqaadashada doodaha quseeya arrimaha Dastuurka” ayuu yiri Wasiir Ku-Xigeenka.
Ugu dambayn, qabashada dood cilmiyeedkan ayaa bilow u ah doodo ay Wasaaradda qaban doonto oo shacabka Soomaaliyeed u sahli doonta in ay waxbadan ka ogaadaan arrimaha Dastuurka.
Nairobi 22ka Maarso 2018 Shirka Wasiirada Bariga Afrika dalalka Urur Goboledka IGAD ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa lagu wadaa inuu ka furmo Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Wasiiradan ayaa waxa ay ka hadlayaan xaaladda Hal Milyan oo Qaxooti ah oo ku nool geeska Afrika, dib u eegsita qorshaha horumarinta Barakacayaasha, iyo arrimo kale.
“Kulanka Wasiirada Bariga Afrika ee IGAD ayaa ka furmaya Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Khamiista 22-ka bishan, waxaa looga hadlayaa xaalada Hal Milyan oo Qaxooti ah oo ku nool geeska Afrika, gaar ahaan Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira Xeryaha Kenya, qorshe cad ayaa loo dejin doonaa Qaxootiga.” Ayaa lagu yiri War qoraal ah oo ka soo baxay IGAD.
Maamulka Puntland State 22ka Maarso 2018Ciidamada Amniga Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland ayaa Howlgallo ay ka sameeyeen Xaafadaha Magaalada waxa ay ku soo qab qabteen dhalinyaro xilliyada habeenkii geysata falalka la xiriira dhaca iyo dilka.
Taliyaha qaybta Booliska ee Gobolka Nugaal Gaashaanle Sare Faarax C/raxmaan Warsame (Galangooli) oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Garowe ayaa waxa uu sheegay in Howlgalkaasi ay ku soo qab qabteen dhalinyaro dhibaatada ku hayay shacabka.
Wuxuu sheegay in qaarkood markii la waayay oo ay baxsadeen Ciidamadu ay soo xireen waalidiintii dhalay si ay u keenaan dhalinyaradaasi falalka noocaas ah ku kacaysa.
Sidoo kale Taliyaha ayaa waxa uu ka hadlay Gabar yar oo habeen ka hor kufsi wadareed loogu gaystay Togga wayn ee dhexmara Magaalada Garowe, wuxuuna sheegay Taliyaha in gabadhaasi laga kaxaystay xaafadii ay daganayd, isaga oo sidoo kale tilmaamay in qaar ka mid ah raggii falkaasi sameeyay ay Ciidamadu gacanta ku soo dhigeen.
Gaashaanle Sare Faarax C/raxmaan Warsame ayaa Waalidiinta dhalay dhalinyaradaasi dhaca, dilka iyo kufsigaba ka gaysanaysa Magaalada Garowe ugu baaqay in ay ubadkooda ogaadaan.
Maraykanka 22ka Maarso 2018 Mareykanka ayaa xayiraado ku soo rogay shirkado ka ganacsada shidaalka dalka Suudaanta Koonfureed, si loo yareeyo lacagaha lagu hurinaya colaadda sokeeye ee dalkaasi curdinka ah.
Mareykanka ayaa sheegaya in shirkadaha Mareykanka iyo waddamada kale laga leeyahay ay hadda wixii ka dambeeya u baahanayaan ruqsad gaar ah si ay tiknolojiyadda iyo qalabka Mareykanka lagu sameeyay ay ugu dhoofiyaan 15 shirkadooda oo ku lug leh ka ganacsiga saliidda dalkaasi Suudaanta koonfureed iyo xitaa laamaha dowladda.
Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegeysa in dowladda madaxweyne Salva Kiir iyo waxa ay ku tilmaantay saraakiil musuqmaasuq uu hareeyay in ay dhaqaalaha ka soo xarooda saliidda ku iibsanayaan hub, kuna maalgelinayaan maleeshiiyaad u dagaalama iyo in ay ku dhibaateeyaan dedaalada nabadeed.
Bishii la soo dhaafay ayaa Mareykanka waxa uu xayiraado dhanka hubka ah ku soo rogay dowladda Suudaanta Koonfureed.
Shirkadaha hadda lagu xusay liiska Mareykanka ayaa mustaqbalka waxaa ku adkaan doono in ay soo iibsadaan qalab ay ku dayactiraan qalabka saliidda lagu soo saaro, taa oo dhibaateyn doonto wax soo saarkooda.
Maraykanka 22ka Maarso 2018 Booliiska dalka Maraykanka ayaa magacaabay qofka looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay bambooyinkii bashqadaha ku jiray ee lagu bartilmaameedsaday magaalada Austin ee dalka Maraykanka, waxayna sheegeen in uu ahaa Mark Anthony Conditt oo 23 jir ah.
Wuxuu ku dhintay qarax uu ka dhex sameeyay gaarigiisa ka dib markii ay ku soo dhawaadeen askar ka soo cayrsatay magaalada Round Rock oo ku taalla waqooyiga magaalada Texas.
Saraakiishu waxay sheegen in uu ku noolaa guri uu dad la wadaagayay oo ku yaalla meel 30km u jirta magaalada Austin.
Baareyaashu waxay sheegeen in aysan jirin walxo kale oo dheeri ah oo khatar ku ah bulshada.
Booliiska ayaa saxafiyiinta u sheegay in Condit looga shakisan yahay shan qarax oo dilay labo ruux, dhaawacayna lix ruux oo kale – muuqaal uu taleefankiisa ku duubayna ku qirtay in uu isagu qaraxyadaas ka dambeeyay.
Muuqaalka 25ka daqiiqo ah ayaa laga helay taleefankiisa ka dib markii uu Arbacadii is qarxiyay iyadoo booliisku ay ku raad joogaan.
“Wax argagixisanimo ah ma uusan soo hadal qaadin, wax nacayb ahna ma uusan soo hadal qaadin, balse waxay ahayd caro wiil yar oo caqabado la kulmay, wuxuu ka hadlay caqabado nolosha ka haystay” sida uu saxafiyiinta u sheegay madax booliiska ee Austin.
Maraykanka 22ka Maarso 2018 Maamulka Trump ayaa qorsheynaya inuu maanta ku dhawaaqo cunna-qabateyn ka dhan ah Shiinaha, kaddib markii uu u arkay in dalkaasi uu dhiirrigelinayo xatooyada iyo minguurinta ganacsiyada Mareykanka.
Aqalka Cad ayaa sheegay in tallaabadan ay imaaneyso kaddib sanado ay ka wada hadlayeen arrintan, taas oo aysan waxba ka miro-dhalin.
Cunna-qabateynta ayaa la filayaa inay ku jirto canshuurta iyo weliba kuwo kale.
Qorshaha Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inuu horseedo dagaal ba`an oo dhanka ganacsiga ah.
Aqalka Cad ayaa lagu soo warramayaa inuu Shiinaha ku soo rogo canshuur dhan $30bn-$60bn iyo weliba tallaabooyin kale oo xayiri doona maalgashiga.
Mareykanka ayaa sidoo kale doonaya inuu cabasho u gudbiyo Ururka Caalamiga ah ee Ganacsiga.
Wuxuu Mareykanku helay caddeymo ah in Shiinuhu uu Mareykanku ku yeelanayo warshado muhiim ah, iyo inuu fuliyo uuna taageero weerarrada dhanka Internetka ah.
Xogtan ayaa lagu helay baaritaan lagu sameeyay dhaqanka Shiinaha, taas oo uu madaxweyne Trump amray bishii August.
Tallaabadani taageero buuxda maka haysataa gudaha Mareykanka?
Waxaa Mareykanka ka jira walaac isa soo taraya oo ku aaddan in Shiinaha uu doonayo tiknolojiyad loo abuuro dano milatari awgood.
Congress-ka ayaa isaguna qorsheynaya sharci sare u qaadi kara awoodda ay dowladdu dib ugu eegeyso heshiisyada ganacsiyada ajaanibta.
Balse siyaasiyiinta qaar, warshadaha iyo ganacsatada ayaa walaac ka muujiyay in tallaabadaasi ay aargoosi ka dhalato.
Muxuu Shiinuhu leeyahay?
Shiinaha ayaa sheegay in cidna aysan ku guuleysaneynin dagaal ganacsi.
Talaadadii, raysal wasaaraha Shiinaha Le Keqiang ayaa sheegay inuu rajeynayo in labada dhinacba ay xaaladda dejiyaan.
Wuxuu sidoo kale sheegay inuu rajeynayo in Mareykanku uu fududeyn doono xayiraadaha uu saaray waxyaabaha uu u dhoofiyo Shiinaha.
Peru 22ka Maarso 2018 Madaxweynaha dalka Peru Pedro Pablo Kuczynski ayaa isu casilay fadeexad la xiriirta in uu codadkii doorashada iibsaday.
Wuu diiday in uu wax khalad ah sameeyay laakin Arbacadii ayuu sheegay in uusan rabin in uu caqabad ku noqdo horumarka dalka.
Hogaamiyeyaasha xisbiga ee aqalka Congresska ku jira ayaa markii dambana aqbalay iscasilaadda madaxweynaha Pedro.
Wuxuu wajahayay codka kalsoonida oo la qaban lahaa Khamiista.
Caddaadiska ayaa ku sii badanayay tan iyo markii uu soo baxay muuqaal muujinaya dad ay xulafo yihiin oo mucaaradka u balanqaadaya lacago haddii ay codka ku taageeraan.
Kuczynski oo 79 jir ah ayaa ka badbaaday cod kalsooni kala noqosho oo la qaaday bishii Disembar.
Dadka ka soo horjeeda waxay doonayeen in ay xilka uga qaadaan eedaymo sheegayay in uu laaluush ka qaatay shirkadda wayn ee dhismaha ee Odebrecht oo Brazil laga leeyahay.
Laakiin codad yar ayuu ku badbaaday mucaaradka ayuuna ku eedeeyay in ay isku dayayaan in ay afgambi sameeyaan.
Khudbad uu qaranka u jeediyay ayuu Pedro ku sheegay in muuqaalkaas la isku kabkabay oo la jarjaray si xilka looga qaado.
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Amiirka dalka Qatar Tamiim Bin Xamad ayaa lagu waramayaa in Soo magacaabay Safiir sare oo magaciisa la yiraahdo Xasan Xamse Asad Haashim,oo ah nin ayan Soomaalidu horay u aqoon, ka hor inta aynaan u galin fallanqaynta waxa arinkani ka dhiganyahay,aan aqristayaasha la wadaago Waa maxay ergay sare ” Ambassador Extraordinary?
Haddaba,tilaabadani maxay ka dhigantahay?!
Waxaan oran karaa dalka Qatar in uu Soomaaliya u arkay in uu yahay dal muhiim ah,loona baahanyahay in siyaasadiisa si dhow loo darso,hardanka iminka jirana kaalin buuxda laga galo,waana markii ugu horraysay dal carbeed uu soo dirsado safiir Sare,soomaaliya -ka sakow- in ay tahay dhul dihin,misana waa meel istiraatiiji ah,waa goobta 7-da badood ee dunida laga xukumo sida uu yiri “Alfred Thayer Mahan” oo ahaa khabiir American ah oo ku xeel-dheeraa Istiraatiijiyadda,dhintayna 1914-kii,wuxuuna yiri “qofkii bad weynta India hanta,dhammaan badaha dunida inteeda kale isaga ayaa ka ariminaya”. tartanka qaawan ee iminka socdana,una dhaxeeya dunida si dekedo iyo marin badeedyo loo helo waxay daba socotaa istiraatijiyadaas fog.
sida aynu wada ogsoonahayba maalmahaan dambe waxaa jiray khilaaf xooggan oo golayaasha dowladda federalka ah ka dhex-aloosnaa,gaar ahaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo raysul wasaaraha,waxaana laysku qabtay arimaha heshiisyada qalaad oo ay ka mid yihiin: dekedaha,iyo khilaafyo kaloo soo jiitamayay.
mar hadday noo muuqatay muhiimadda dalkeenu leeyahay,waxaa loo baahanyahay in aan qaadanno siyaasadda loo yaqaan”dhex dhexaadnimada waxtarka leh” waa tan inta badan saldanada Cumaan ku dhaqanto,Turkigana uu Wasiirkeedii hore ee arimaha dibadda ” Abmed Daa’uud Oglow” uu ka dhigay mid ka mida tiirarka afarta ah ee lagu hago siyaasadooda arimaha dibadda waxa loo yaqaan cadow yaraynta ama dhimista ” Hatred of hostilities” Qatarna ay Sudan u dhistay Dekedda Buurta Sudan,imaaraatkuna isbuucii la soo dhaafay ku shubay Bank-ga dhexe Ee Sudan lacag dhan 4 Trillion oo deen ah,Shalayna Madaxweyne Cumar Al-Bashiir ka degay Qaahira,waa siyaasadda “Aldaabka furan” maxaa Somaliya rakhiis ka dhigay? maynu dhammaan gacmaha u furno,inagoo ilaashanayna danaheena guud,Allow yaa Villa Soomaaliya taladaas iga gaarsiiya!
gunnaanadkii, waxaa lagama maarmaan ah in aynu ogaano in diblumaasiyadda dunidu ku dhisantahay sinnaan,dhinacyaduna si isku mid ah u dirsadaan ergooyinkooda matalaya dalalka,wasaaradda Arimaha dibadda Soomaaliyana waxaa looga fadhiyaa in Safiir Sidaas oo kale ah kula taliso in madaxweynuhu u ergeeyo dalka Qatar,isla mar ahaantaana Qatar ay ka qayb qaadataa dhisidda kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya, labada shacabna is dhex-maraan.
waxaa xusid mudan in Safaaradda Turkiga ay shacabka Soomaaliyeed siiso dal-ku-gal, meesha safaaradda Imaaraatku iyo tan Qatarba ayan dal-ku-gal siin Soomaalida,waana arin baal-marsan sinnanta matalaadda diblumaasiyadeed,goormaynu garan doonnaa micnaha uu dalkeenu ku fadhiyo!
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ahna Taliyaha guud ee Ciidammada qalabka sida ee Soomaaliye Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maanta Tababar usoo xiray Urur ka tirsan Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, kuwaasi oo muddo Sagaal bilood ah Tababar Ciidan oo dhameystiran ku qaatay Magaaladda Muqdisho.
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Faah faahin ayaa ka soo baxaya iska hor imaad culus oo maanta barqadii ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, kaasoo u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Xasilinta ee NISA iyo ciidanka uu tababaray Imaaraadka Carabta.
Iska hor imaadka ayaa la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu saameeyay xaafado ka fog halka lagu dagaalamay oo ay gaartay rasaasta culus oo ka dhacay qoriga dhashiikaha.
Wararka qaar ayaa sheegaya in iska hor imaadka uu ka dhashay wado u xirneyd Ciidanka uu tababaro Imaaraadka Carabta oo ku dhow Isgoyska Tarabuunka, iyadoo muran ay dhex martay Ciidanka Xasilinta oo isku dayay inay xoog ku gudbaan.
Intaas kaddib ayaa la sheegay in labada dhinac ay is rasaaseyn ka dhex bilaabatay, kaasoo ku faafay xaafadaha degmada Hodan, iyadoo ku dhowaad muddo 30 daqiiqo ay is rasaaseynta socotay.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in illaa afar ruux oo labo ka mid ah ay rayid yihiin ku dhinteen, halka kuwa kale ay ahaayeen askar, waxaana la soo warinayaa in khasaaraha intaa ka badan yahay, maadaama rasaasta ka dhacday qoryaha ku rakiban baabuurta dagaalka ay gaartay xaafado fog.
Ciidamada uu tababaray Imaaraadka carabta ayaa la wareegay mid ka mid ah gaadiidka dagaal ee Ciidamada Xasilinta, waxaana ay la aadeen xero ay ku leeyihiin agagaarka Tarabuunka.
Xaalada ayaa iminka degan, waxaana xiisada dagaal ku soo baxay saraakiisha ciidamada Milateriga oo kala dhex galay labada dhinac, waxaana sida caadada la filayaa in loo saaro Guddi baaritaan ku sameeya dhacdadan.
Iska hor imaadka maanta barqadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa si aad ah u saameeyay magaalada oo idil, waxaana uu ku soo beegmay, iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu maalmahan ku sugnaa Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga oo u joogay howlo la xiriira isku dubaridka iyo abaabulka ciidamada xoogga dalka.
Muqdisho 22ka Maarso 2018 Guddigii Aqalka sare ee ku baxay xalinta khilaafka Golaha Shacabka ayaa maanta soo saaray go’aano dhowr qodob ka kooban, kaddib markii ay la kulmeen dhinacyada uu khilaafka u dhaxeeyo iyo Madaxda dowladda.
WARARKA MAANTA 20ka Maarso 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Ama Yaa noqon doona Guddoomiyaha Cusub ee soo socda? Haddii uu Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre iscasili waayo kadib markii ay beesha caalamka diiday inay wax dhaqaallo ah siiso xukuummadiisa fashilantay muddo sannad ah? Ma xaqiiq baa inuu iscasili rabo Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo hadda xaqiiqsaday inay siyaasadii dalka uu waxba ka qaban waayey markii uu isku dayey inuu heshiis beenaad kala dhex dhigo Guddoomiya Jawaari Iyo Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Xassan Kheyre? Ummada Soomaaliyeed Iyo Labada Aqal ee Ummadda Soomaaliyeed matala waxay u baahan yihiin in la soo doorto Raysal Wasaare cusub oo horay dadka, dalka iyo dibaddaba wax musuqmaasuq ah uga soo galin haddii kale waxaa khasab ah inuu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iscasilo si ay labada aqal u soo doortaan Madaxweyne cusub oo dhibka iyo qaska siyaasaddeed dadka iyo dalka ka saara!
Muqdisho 20ka Maarso 2018 Duqa muqdisho oo ka qeyb galayey kulan looga hadlayey sidii saxaafada soomaalida ay u dhaqan galin lahayd sharcigii saxaafada ee kal hore la ansixiyey ayaa sheegay in loo baahan yahay in warfidiyeenadu ay ku qanacsanaadaan xeerka la meelmariyey si dhaqan galkiisu uu u hirgalo Gudoomiye yariisow ayaa sidoo kale xusay in xiligii uu ahaa wasiirka warfaafinta uu dib eegis ku sameeyey xeerkan taasina uu uga gol lahaa in warfidiyeenadu ku qancaaan isla markaana qaab sharci ah loo wada shaqeeyo
Mudane yariisow ayaa sidoo kale xusay in ay wada tashiyo la sameeyeen hay’adaha UNESCO & HRW taasina ay ugu wacanayd in ay xeerka saxaafada ka dhigaan mid caalami ah.
Rwanda 20ka Maarso 2018 Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa lagu casuumay ka qeybgeli doona Shir madaxeedka Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika oo Maalinta Arbacada ah ka dhici doona dalka Ruwanda, waxaana sidoo kale ka qeybgeli doona hoggaamiyaasha 35 dal.
Madaxda kale ee shirkaasi ka qeyb geli doonta ayaa waxaa ka mid ah Guddoomiyaha Bankiga horumarinta Afrika Adesina Akinwumi, Xoghayaha guud ee Ururka Ganacsiga ee COMESA, Sindiso Ngwenya iyo wakiilka Guddiga dhaqaalaha Qaramada Midoobey ee Afrika Vera Songwe.
Madaxda Wadamadooda lagu casuumay ee ilaa iyo hadda la shaaciyay ayaa waxaa ka mid ah Congo, Brazzaville, Niger, Chad, Uganda, Djibouti,Somalia, Madagascar, The Gambia, Guinea Bissau, Mozambique, Nigeria, Central African Republic, Libya, Burkina Faso, Angola, Zimbabwe, South Africa, Senegal, Kenya, Mali, Madagascar, Gabon, Guinea, Sahrawi, Ghana, Lesotho, iyo Comoros.
Shir madaxeedka Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika ayaa markii la soo gaba gabeeyo waxaa halkaasi lagu saxiixan doonaa heshiiska dhaq dhaqaaqa Ganacsiga xorta ah ee Qaarada Afrika.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maalmo ka hor dib u dhigtay booqasho isaga iyo wafdi uu horkacayo ku tegi lahaayeen dalka Qadar, sababo la xiriira xiisada siyaasadeed ee ka dhex aloosan baarlamanka awgeed, lamana oga sida uu ka yeeli doono ka qeyb galka shirkan maadaama ay weli taagan tahay xiisadii ka baajisay safarkii hore
Muqdisho 20ka Maarso 2018 Tiradii ugu badneyd Xubnaha Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka soo muuqday Mooshinka ka dhanka ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, kaasi oo la gudbiyay 14-kii bishan March.
Kulan qado ahaa kuna lifaaqsanaa dhoolatus oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotelka SYL si aan kala har laheyn waxaa uga soo dhex muuqday Wasiirada ugu muhiimsan Xukuumadda Federaalka, taasi oo si aad ah ay shacabka Soomaaliyeed u hadal hayaan.
Wasiirada kulanmkaasi ka soo muuqday oo Camerada ay soo qabatay waxaa ka mid ahaa Wasiirka Amniga Soomnaaliya Maxamed Abuurkar Islow (Ducaalle), Wasiirka Maaliyadda Dr. C/raxmaan Ducaalle Bayle, Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraaha Khadiijo Maxamed Diiriye, Wasiiro ku xigeeno iyo Wasiiru Dowlaayaal.
Wasiirada Mooshinka ka hadalkiisa aanan ku qanacsaneyn waxa ka mid ah Wasiirka Maaliyadda Bayle oo qudbad halkaasi uu ka jeediiyay kaga hadlay arrimaha Maaliyadda, Akoono in loo furo Ciidamada Booliska iyo bixinta Canshuurta.
Wasiirada la dhacsan Mooshinka iyo qaabka ay wax u socdaan waxaa ka mid ah Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Khadiijo Maxamed Diiriye oo sheegtay Mooshinka abaabulkiisa in inta badan ay leeyihiin Wasiirada.
Xildhibaanada iyo Wasiirada kulanka yeeshay ayaa waxa ay sheegeen in tiro ahaan ay garayaan 197 xildhibaan, ayna ku kalsoon yihiin in ay kursiga Guddoomiyenimo ka tuuri karaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Sida muuqata waxaa hakad ku yimid oo istaagay shaqooyinkii ka socday xafiisyada Dowladda gaar ahaan kuwa Xukuumadda iyo Baarlamaanka, taasi oo ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira Baarlamaanka Golaha Shacabka.
Hadii aan dib u xusuusano 2017-kii Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud xilligii Olaha Doorashada oo saacado un ay ka harsneyd Doorashada ayuu sheegay inuu heysto codadka in ka badan 200 oo xildhibaan, balse waala ogaa tii ka dhacday hoolka Doorashada, oo waxaa is rogay xildhibaanada, sidaasina Madaxweynaha uu ku dhaafi waayay codadka 97.
Dadka Baraha bulshada isticmaala iyo dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in bandhigii xildhibaanada shalay ay la mid tahay tii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, keliyana muhiimada ay tahay in la sugto markii la gaaro codeynta ee la isku arko xarunta Golaha Shacabka iyo waxa dhici kara.
Muqdisho 20ka Maarso 2018 Howlgaladaan ay kasmaeeyeen ciidmada dowladda soomaliya gaar ahaan kuwa Xasilinta Caasimadda degmada Yaaqshiid ee gobalkaan Banaadir ayaa imaanaya kadib markii xalay xaafada Towfiiq ee degmadaasi lagu dilay 1 askari iyadoona dhaawac loo geystay qof shacab ahi oo goobta ka agdhawaa.
Dilka iyo dhaawaca raga geystay oo ku hubeysnaay Bastoolado ayaa la sheegay inay kabaxsadeen goobta falkaasi ay ka geysteen.
Durbadiiba ciidmada dowladda Soomaliya ee halkaasi gaaray islamarkaana sameyana howlagalada ayaa waxey u qab qabteen falkii dhacay dad badan wallow dadka qaar lagu sheegay in lasii daayay halka qaar kalane horay loo watay.
Dadka dagan Xaafada Towfiiq ee degmada Yaaqshiid ee gobalkaan Banaadir ayaa ayaa sheegay in ay soo wajahday baqdin fara badan maadamaa ciidmada dowladda ay ugudaha ugaleen xaafadaasi kuwasi oo guryaha kala baxayay dhalinyarada joogta xaafadahooda.
Mararka qaar magaalada Muqdisho waxaa ka dhaca falal lidi ku ah Amniga Wallow howlgalada ciidmada ay sameynayaane uu bar bar socdo.
Waxaana xusid mudan in Habeen ka hor degmada Dharkinkey ee gobalkaaan lagu dilay Askari katirsanaay milatariga soomaliya.
China 20ka Maarso 2018 Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa baarlamaanka dalkiisa u sheegay in ay waajib tahay in Shiinuhu uusan is cajabinin marka uu fiiriyo horumarka uu ku tallaabsaday.
Isaga oo khudbad ka jeedinaya gabogabada shirka sannadlaha ah ee baarlamaanka ayuu Xi sheegay in Shiinuhu uu marayo marxalad adag marka taariikhdiisa la fiiriyo waxa kali ah ee badbaadin karana uu yahay habka hantiwadaagga.
Waxaa kale oo uu ka digay gooni ugoosashada Taiwan iyo iskudayga lagu soo doonayo in Shiinaha lagu kala qaybiyo.
Xi ayaa hadda loo diyaariyay in uu xilka hayo inta cimrigiisa ka dhiman ka dib markii baarlamaanku ay meesha ka saareen xadidaadii labada jeer ahayd ee xilka madaxweynenimada.
Mawshinkaas waxaa si aqlabiyad ah u meelmariyay ku dhawaad 3,000 oo ergo ah oo fadhiday markii uu kulanku billawday.
Baarlamaanka ayaa sannadkiiba hal mar shira. Wuxuuna shaambad muhiim ah u yahay isbadallada ay masuuliyiintu go’aansadaan.
IGAD 20ka Maarso 2018 Wasiirrada ka socdo dalalka urur goboleedkha IGAD ayaa khamiista ku kulmi-doonna magaalada Nairobi ee Kenya si meel loo saarro arrinta illaa hal Miyal oo qaxooti ah oo dalalka dariska la ah Soomaaliya joogay muddo 30 sano ah.
Wasiirrada IGAD, waxaa la filayaa in ay soo bandhigaan qorshe hirgelineed oo ku saabsan heshiiska Nairobi iyo sidii loo hubin lahaa howlaha farsamo iyo midda maalgelinta
Hargaysa 20ka Maarso 2018 Ganacsatada iyo Sariflayaasha magaalada hargeisa ayaa iska mamnuucay wax ku iibsiga lacagta faalsada ah ee shilin somaliland taaso dhawaan maamulka muuse biixi ku soo rogay shirkadaha telesom iyo somtel inay joojiyan adeega Zaad iyo Edahab ee Dollarka la isugu diro una rogan shilin somalialnd
Sool 20ka Maarso 2018 Deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dheceen dibad baxyo looga soo horjeedo maamulka Soomaaliland iyo boqolaal katirsan ciidankiisa oo muddo dhowr bilood ah ku sugan deegaankaasi.
WARARKA MAANTA 19ka Maarso 2018 Sir Culus!
Bardaale 19ka Maarso 2018 Arrin mucjiso ah ayaa haysata gabar ku nool Gobolka Baay ee deganada Koonfur Galbeed oo korkeeda uu dab ka kacaayo, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed.
Gabadhan oo marwo ah ayaa isaga carartay Magaalada Baydhabo, waxayna hadda joogta Degmada Bardaale ee Gobolka Baay, kadib markii saddex guri oo ay ka degtay Magaalada Baydhabo uu saameeyay dabka korkeeda ka kacaayo.
Taliyaha Saldhiga Degmada Bardaale ee Gobolka Baay, Ibraahin Roobow, ayaa sheegay arrintaan inay tahay mid mucjiso ah, haddana gabadha ay joogto Degmada Bardaale oo ay isaga soo carartay Magaalada Baydhabo.
“Marka Dabku ka kacayo Gabadha waxay tiri culeys ayaa isoo saarmaya, kadibna dhimbilo holac ah ayaa ka firdhaya, kaasi ayaa gubaya dhammaan meesha ay joogto, ha ahaado Guri ama Baabuur, Dabkaasi iyada wax ma gaarsiinayo ee waa kacayaa oo kaliya dhimbilo iyo Holac.” Ayuu yiri Taliyaha Saldhiga Degmada Bardaale.
Waa dhacdo ku cusub deganada Soomaalida in la arko qof dab korkiisa uu ka kacaayo, uuna saameynaayo goobta ay ku sugan tahay.
Muqdisho 19ka Maarso 2018 xaafada Macalin Nuur ee degmada Dharkeynley koox ku hubeysan Bastoolado ayaa halkaasi waxa ay ku toogteen Sarkaal sare oo ka tirsanaa Ciidanka Millitariga Soomaaliya.
Dableyda oo dadka degaanka ay ku sheegeen laba dhalinyaro ah oo hubeysnaa ayaa waxa ay beegsadeen sarkaalkan, isaga oo ku jiray xarun Ganacsi oo uu ku lahaa xaafada Macalin Nuur, isla goobta ayuuna ku geeryooday.
Raggii dilka geystay oo la rumeysan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-shabaab ayaa goobta ka baxsaday, kadib markii ay gaareen dantii ay lahaayeen oo aheyd in ay dilaan Sarkaalkan.
Hay’adaha ammaanka ayaa xaqiijiyay dilkan, waxayna sarkaalkan magaciisa ku soo koobeen Yuusuf, kaasi oo ka mid ahaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka.
Ciidamada Dowladda Federaalka oo tagay goobta uu dilka ka dhacay ayaa waxa ay halkaasi ka qaadeen Meydka Marxuum Yuusuf, iyaga oo ula dhaqaaqay xarunta Dambi baarista e CID-da
Dilalka qorsheysan ayaa muddooyinkan dambe Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka yaraa, sababo ku aadan Koontaroolada ciidanka ee baarista oo aad loo badiyay.
Ururka Al-Shabaab ayaa Magaalada Muqdisho ku beegsada Askarta, Saraakiisha ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xubno kale, shalay oo ugu dambeysay xaafada Taleex ee degmada Hodan waxaa lagu dilay Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale.
Muqdisho 19ka Maarso 2018 Xilli wali wadooyin badan oo kamid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ay yihiin kuwo u go’doonsan Al-shabaab ayaa waxaa mas’uuliyiinta maamulkaasi ay sheegayaan in bilaha soo socda dhamaan wadooyinka xaniban la isku furi doono.
Afhayeenka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuurdiin Yusuf Abuukar Gacma oo sheegay in Madaxweynaha Koonfur Galbeed shariif xasan sheikh Aadan uu amray in si dhaqsi ah loo furo wadooyinka go’doonsan ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in dhawaan ciidanka xooga bilaabayaan dagaal Al-shabaab looga saaryo meelaha ay kaga suganyihiin deegaanada Koonfur Galbeed si loo furo wadooyinkaasi.
Ma ahan markii ugu horeysay ee mas’uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed sheegaan in ay wadaan qorshe la iskugu furayo wadooyinka mara Shabeelaha Hoose , Baay iyo Bakool hase ahaateewaxaa jirta in hada ay socdaan dhaq dhaqaayo ciidan oo ka dhan ah Al-shabaab kana socda deegaanada Koonfur Galbeed.
Ruushka 19ka Maarso 2018 Madaxwayne Vladimir Putin ayaa 6 sano oo kale xafiiska sii hayn doona ka dib markii uu si wayn ugu guulaystay doorashadii dalkaasi ka dhacday.
Khudbadda guusha oo uu ka jeediyay magaaladda Moscow ayaa waxa uu sheegay in natiijada doorashada uu u arko in ay tahay kalsooni la siiyay waxqabadkiisa.
Madaxwayne Putin ayaa sidoo kale ku baaqay midnimo iyo isku duubnaan.
Madaxweynaha ayaa bogaadiyay guusha uu ka gaaray doorashada madaxtinimda Ruushka, waxaa uuna sheegay in arrintani ay ku timid waxqabadkiisa.
Mar u ka hadlayay isu soo bax balaaran oo lagu qabtay bartamaha cassimada Moscow ayaa madaxwayne Putin waxaa uu sheegay in natiijada doorashada ya ka tarjumeeyso kalsooni iyo ay shacabka ku qabaan.
Madaxwayne Putin ayaa waxba kama jiran ku tilmaamay su’aalaha ku saabsan in uu xilka hayni doono inta cumrigiisa ka dhiman.
Mr Vladimir Putin ayaa dalka Ruushka ka talinayay tan iyo sanadii 1999 oo uu mar ahaa rai’sul wasaare.
Madaxwayne Putin ayaa waxaa doorashadan kula loolamaysa 7 musharax oo kale .
Hogaamiyahii Mucaaradka ee ugu cadcaddaa doorashada Alexei Navalny ayaa laga mamnuucay in uu doorashada ka qeybqaato.
Muqdisho 19ka Maarso 2018 Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa Dab khasaare geystay oo xalay saq dhexe ka kacay guri ku yaala degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, sida ay sheegeen Maamulka degmadaasi.
Dabkan oo xalay socday mudo saacad iyo wax ka badan ayaa waxa uu dilay ugu yaraan Todobo qof, oo xilliguu uu dabka kacayay ku jiray gudaha guriga.
Dadka dhintay waxa ay isugu jiraan Hooyo iyo 6 Carruur ah oo ay dhashay, iyada oo sidoo kale uu dhaawac soo gaaray Aabihii guriga oo howlo samata bixin ah u sameynayay qoyska.
Dabkan oo ay dadka degaanka ay sheegeen in ay sababay Koronto ayaa dhimashada badan ee ka dhashay waxa ay ka dambeysay kadib markii dadka guriga degnaa xilligaasi ay hurdayeen.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamed C/laahi (Tuulax) ayaa sheegay in xalay goor dambe ay u gurmadeen dadkii deganaa guriga uu dabka ka kacay, intii karaankooda ah.
Waxaa uu sheegay in nasiib daro dadka deganaa guriga ay intooda badan geeriyoodeen kaliyana uu ka bad baaday Aabihii guriga oo isaguba dhaawac ah.
Tuulax ayaa sheegay in ay ku dadaaleen xakameynta Dabka si uusan ugu fidin xaafadaha kale ee ka agdhaw khasaaruhuna uusan uga badan inta uu hadda yahay.
Allaha u naxariistee Dhammaan dadkii ku geeryooday dabkaasi oo isugu jira Hooyada iyo caruurteeda ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso Magaalada Muqdisho
Muqdisho 19ka Maarso 2018
WARARKA MAANTA 18ka Maarso 2018 Sir Culus!
Su'aallaha Maanta: Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Maxuu u aamusan yahay weli Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ayaamahan dembe maskaxda si fiican u khafiiftay asagoo ogaaday inaysan wax dhaqaallo ah siin doonin xukuummadda Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre? Maxay tahay sababta loo rabo in xilka laga tuuro Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Prof. Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo si cad u diiday inuu saxiixo heshiisyo qarsoodi ah oo uu keenaya Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre oo raba in heshiisyadiis si toos ah loo keenin golaha shacabka si ay uga doodaan shirkaddahaas damacsan inay boobaan shidaalka iyo kheyraadka dabeeciga ee Illaahay ku mannaystay Ummadda Soomaaliyeed? Meeqo shirkaddood ayuu si qarsoodi ah heshiis ula soo galay Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre? Mase maxaad ka ogtahay taariikh nololeedka xaqiiqadaha ee Khaa'inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre? Maxaa muddo 5 bilood ah aan wax mushahar loo siinin xildhibaannadda labada aqal iyo shaqaalaha dowliga ah? Halkee ku dembaysay sheekadii Ciidamada isku-dhafida maamul gobaleedyadda? Yaa noqon doona Guddoomiyaha soo socda hadii laga takhaluso Guddoomiye Mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo horayba labada Raysal Wasaare uga takhalusay? Yaa Soomaaliya u maqan hadii labada aqal iyo xildhibaannadii ay u kala shaqaynaayaan shaqsiyaad siyaasadda dalka isku-haya?
WARARKA MAANTA 25ka Feebaraayo 2018 Sir Culus! Yaa maanta runta qarin kara?
Su'aalaha Maanta” Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Maxay Dowladda Jabuuti u diiday Shirkadda DP World oo damacday inay cunna-qabateen iyo khaladaad ay ku haysay Shacabka Iyo Dowladda Jabuuti? Haddaba ma waxay u